ခိုင်ခိုင်စောလွင်: March 2012
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 2:46 AM No comments:
ခွန်အားဖြည့်မိငယ် ( ကိုနေ၀င်း)
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 2:41 AM No comments:
မူဆယ်ကနေမနက် ၅း၃၀ ကားထွက်တယ်….အားလုံးနွမ်းလျှပြီးပြန်လာကြတယ်…ကွတ်ခိုင်ရောက်တော့ ထလရကိုသတင်းပို့ပြီးတော့ ထမင်း စားကြတယ်….တစ်လမ်းလုံးမှာစွယ်တော်တွေဖွေးနေအောင်ပွင့်တာ အဝေး ကကြည့်ရင် နှင်းတောင်တွေလားလို့ထင်ရတယ်….ကွတ်ခိုင်ထမင်းဆိုင်မှာစွယ်တော်ပွင့်ကြော်ချက်စားခဲ့ရတယ်.. နောက်တော့သိန္နီကိုဖြတ်ပြီးလားရှိုးကိုဝင်တယ်….ဆရာမတည်းခိုခန်းမှာဘဲတည်းတယ်…ဆရာမကလည်း အသွား ကတည်းကသိနေတော့ ကလေးတွေမပါဘူးလားမေးတော့….၀မ်းနဲစွာနဲ့ဘဲမပါဘူးလို့ဖြေရတယ်…. ကိုမောင်မောင် က ထောက်လှမ်းရေး၉ကိုသတင်းပို့ရတယ်….ထလ၇ကလည်း ကိုယ်တို့နဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြော ပေမဲ့ ကလေးတွေမပါလာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာရော…ခရီးပန်းပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းကြဘူးဆိုလို့…. မနက်ကိုခရီးဆက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်….
မနက်၎း၀၀နာရီထပြီးကားဂိတ်ကိုသွားကြတယ်….၅း၃၀နာရီမှာလားရှိုးကစထွက်တယ်…မြို့အထွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာမဖွင့်သေးလို့စောင့်ရပြီးမနက်၇း၀၀နာရီမှကားဆက်ထွက်ရတယ်…ကျောက်မဲရောက်တော့ ထမင်းစားပြီးဆက်ထွက်ကြတယ်….သီပေါ…နောင်ချိုရောက်တယ်….ဂုတ်ထိပ်တံတားကိုအပြန်ကျမှဘဲမြင်ရ တော့တယ်…မေမြို့…အနီးစခန်းရောက်တော့ ကားရေဆေးနားပြီးဆက်ထွက်တယ်….မေမြို့လမ်းတလျှောက် စိန်ပန်းပြာတွေပွင့်နေတာအရမ်းလှတာပဲ….သီချင်းထဲမှာပါတဲ့စိန်ပန်းပြာပန်းမြို့တော်ဆီဆိုတာနဲ့ကိုက်နေတာပဲ.. မေမြို့ကထွက်ပြီးနောက်ပုသိမ်ကြီး….နောက်တော့မန္တလေးဝင်လာတာပါဘဲ….လမ်း၃၀မှာဆင်းပြီး ကိုမောင်မောင် အိမ်သွားကြတယ်….အန်ကယ်ကြီးနဲ့အန်တီစန်းအမျိုးသားကထွက်လာကြိုကြတယ်….ကိုမောင်မောင်အိမ်သား တွေပါထွက်လာကြတယ်….ကလေးတွေမပါမှန်းသိတော့ အန်ကယ်ကြီးတို့မျက်နှာပျက်နေကြတယ်….နောက်မှ အလုံးစုံရှင်းပြရတယ်….ကိုမောင်မောင်အိမ်မှာထမင်းစားပြီး မန္တလေးထလရကိုသတင်းပို့ကြရတယ်…ဘာမှမထူး ခြားတဲ့အတွက်….မနက်ဖြန်ရန်ကုန်ပြန်ဘို့စီစဉ်ကြတယ်….မဟာဇေယျာဘုံရပ်ကွက်….အန်ကယ်ကြီးတို့အဒေါ် အိမ်မှာပြန်အိပ်ကြတယ်…..
မနက်၅း၀၀နာရီအရောက်ဘူတာကြီးသွား….လက်မှတ်တန်းစီဝယ်တယ်….သင်္ကြန်အထူးရထားနဲ့မနက် ၇း၃၀နာရီမှာ မန္တလေးကထွက်တယ်….တောတွေတောင်တွေတွေ့တိုင်း သားတွေရှိတဲ့ဆီဘဲ သတိရနေမိတယ်. လမ်းမှာလည်းသင်္ကြန်နားနီးတော့ တလမ်းလုံးရေပက်ကြတယ်….ရန်ကုန်ကိုည၁၀း၃၀ရောက်တယ်….သုဝဏ္ဏကား မရှိတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းကားစီးပြီး သူငယ်ချင်းဆရာမကြီးဆီသွားအိပ်ရတယ်….မနက်၆း၀၀နာရီကျောင်းသွားတော့ အဝေးကနေ ကျောင်းကိုဆေးသုတ်ထားတာတွေ့တော့ စိတ်ချမ်းသာသွားတာဘဲ….
ကျောင်းရောက်တော့ ဆရာမ၃ဦးလည်းရောက်လာကြတယ်…သူတို့အားလုံးလည်းစိတ်ပူရတဲ့အကြောင်း ခုမှဘဲဝမ်းသာသွားကြောင်းပြောကြတယ်….အထွေထွေလုပ်သားလင်မယားကလည်း ၀မ်းသာအားရပါဘဲ..သူတို့ လည်းစိတ်ပူနေတဲ့အကြောင်း ပြောတယ်….ဒါနဲ့ဘဲဆိုက်ကားငှားပြီးအိမ်ကိုပြန်လာတယ်….အိမ်ရောက်တော့ သူတို့ညီ၊သူတို့မောင်၊သူတို့အစ်ကို မပါတော့အားလုံးမျက်နှာမကောင်းကြဘူး….ကိုယ်လည်းပြန်ပန်းမလှတဲ့အ တွက်စိတ်မကောင်းဘူး….ကိုယ်ကစပြီးအိနြေ္ဒပျက်နေရင် ကလေးတွေပိုစိတ်ထိခိုက်မှာစိုးလို့ အိနြေ္ဒဆည်နေရ တယ်….
ကိုယ်လိုဘဲမိဘတွေအားလုံး ပြန်ပန်းမလှတဲ့အတွက် အိမ်ရောက်ရင်ဘယ်လို ဖြေရပါ့နဲ့ စိတ်မောလူမော ရှိနေကြတယ်…ကိုယ်တို့မိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီ ( သို့ ) လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကအမြန်သွားရောက်ပြီး ကယ်တင်ပါမှ သားသမီးတွေလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီး မိဘနဲ့အမြန်တွေ့ရမယ်…အဖွဲ့ အစည်းတွေအမြန်သွားရောက် ကယ်ယူရေးအတွက် မိဘတိုင်းဘုရားမှာအထပ်ထပ် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သနေ ရတယ် …..
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 3:31 AM3comments:
ABSDF(မြောက်ပိုင်း)သတ်ဖြတ်မှုများနှင့်မိခင်တဦး၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း - အပိုင်း - ၄ (ဇာတ်သိမ်း) ·
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 3:19 AM No comments:
ဒီနေ့ဒီရက်ဟာဖြင့် ကိုယ့်အဖို့ ဘယ်လိုမှမျှော်မှန်း မထားမိခဲ့တဲ့ အရာတခုကို တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ မထင်မိခဲ့ပါဘူး။နံက်၉နာရီအရောက် အလက(၄) ကို စတုတ္ထတန်းအဖြေလွှာစစ်ဆေးဘို့ အတွက်အိမ်က ထွက်လာခဲ့တယ်…ကျောင်းရောက်တော့ကိုယ် စစ်ဆေးရမဲ့ ENGLISH ဘာသာရပ်အတွက် နံပါတ်၁+၂+၃ ကိုစစ်ဆေးရတယ်….ဒီနေ့မှာလဲကျောင်းအလုပ်တွေက ဆုံနေတော့..ဒီကပြီးရင် အခြေခံပညာသွားဘို့ ချိန်းထား တာလဲရှိတာနဲ့ ကိုယ်စစ်ရမဲ့နံပါတ်တွေအပြီးစစ်ဆေးပြီးရင် နေ့လည်တစ်နာရီလောက် အခြေခံပညာသွားဘို့ အုပ်စုခေါင်းဆောင် ဆရာမကြီးကိုခွင့်ပန်လိုက်တယ်….ဆရာမကြီးကလည်း ခွင့်ပြုတယ်…
ရုံးရှေ့လဲရောက်ရော ကိုယ့်ကျောင်းကအထွေထွေလုပ်သားနဲ့ အမက(၁၆)ကအထွေထွေလုပ်သား(၂)ယောက် ထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်…တွေ့တွေ့ချင်းဘဲကိုယ့်ကျောင်းက အထွေထွေလုပ်သားက ဆရာမကြီးအိမ်က စာလာပေးတယ်ဆိုပြီး စာထုတ်ပေးတယ်… အိမ်ကစာပေးလာတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲထိတ်သွားတာပေါ့…
စာကိုထုတ်ဖတ်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်း ဆရာမကြီးက ရေးပေးလိုက်တဲ့စာ…အိမ်မှာဧည့်သည်နှစ်ယောက် ရောက်နေလို့ အမြန်ပြန်လာဘို့….နောက်ပြီးသားကိစ္စဆိုတာလဲပါတယ်…
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ သားဆီကလူကြုံလာတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဆိုက်ကား ငှားပြီး အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာတယ်…ရုံးကိုလဲကိုယ့်အထွေထွေလုပ်သားနဲ့ဘဲ အခြေခံပညာမသွားတော့ဘူးလို့ ပြောခိုင်းလိုက်တယ်….အိမ်ကိုကားစီးသွားရင်တစ်ကျပ်ပဲကုန်မယ်ဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ ကားစောင့်ရင်ကြာမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး ဆိုက်ကားငှားစီးသွားတာ… ဆိုက်ကားကလဲနှေးလိုက်တာ….ရောက်ချင်ဇောနဲ့ဆင်းပြီးတောင် ပြေးချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်…နောက်မှဘဲ အချိန်တန်တော့ရောက်မှာဘဲဆိုပြီး ကြိတ်မှိတ်ပြီးလိုက်လာတယ်… ဒါနဲ့အိမ်နားရောက်လာတယ်…အိမ်ကိုအမြန်ပြေးဝင်လာတာပေါ့…
အိမ်ထဲကိုမ၀ံ့မရဲနဲ့ဝင်လာတော့ ကိုယ့်အမျိုးသားနဲ့ ဧည့်သည်(၂)ယောက်တွေ့ရတယ်…ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်အမျိုးသားကို ရှင်ကဘယ်လိုရာက်နေတာလဲမေးတော့ မင်းရဲ့သမီးစုနန္ဒာလွင် ဖုန်းဆက်လို့ ပြန်လာရတာတဲ့.
ဒါနဲ့ကိုယ်လဲအရမ်းကို စိတ်တွေထူပူလာပြီး ဒီစာကိုဘယ်လိုရတာလဲ…ဘယ်သူကပေးလိုက်တာလဲ မေးတော့… စောစောကဧည့်သည်နှစ်ယောက်ထဲက ကိုမောင်မောင်ဆိုတဲ့သူက သူပြီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလက သူ့ညီလဲ အဲဒီထဲရောက်နေတာ အရဲစွန့်သွားတာ ဟိုရောက်တော့ကျောင်းသား(၈၀)ကျော်ကိုဖမ်းထားပြီး န၀တ ထောက် လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲပြီးတော့ (၁၅) ယောက်ကိုသတ်လိုက်ကြတယ်…ကျန်တဲ့(၆၅)ယောက်ထဲက စီစစ်ပြီး မိဘလက် ထဲပြန်အပ်သင့်တဲ့သူကို ပြန်အပ်မယ်…သူတိုနဲ့လက်တွဲရမယ့်လူကို ဆက်ပြီးလက်တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ သူ့ညီအပါ အ၀င် ကျွန်မတို့မိဘ(၆)ဦးနဲ့ ပေါင်း(၇)ဦးကိုခေါ်ပေးပါဆိုလို့ ဒီစာနဲ့အတူလာရတဲ့အကြောင်း စခန်းကို(၂၀)မတ် အရောက်သွားရမဲ့အကြောင်း လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲမန္တလေးကို (၁၂.၃.၉၂) အရောက်လာဘို့အကြောင်း ပြောပြီး သူ့လိပ်စာနဲ့ သူ့ကိုမယုံမှာစိုးလို့ မန္တလေးထောက်လှမ်းရေးကဗိုလ်ကြီးနာမည်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်…
လှမ်းပြီးမေးကြည့်ပါတဲ့…နောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအတွက်အ၀တ်အစား ကိုယ်တို့လိုက်မဲ့ သူတွေအတွက် အနွေးထည် ခြေအိပ် လက်အိပ် ခေါင်းစွပ်ကစ လုံလုံလောက်လောက်ယူခဲ့ဘို့ အကြောင်းနဲ့….
ရန် ကုန်ကကိုယ်နဲ့ဘ၀တူလိပ်စာတွေလဲပေးခဲ့တယ်…ကိုယ်လဲဒါဖြင့် နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးကို သတင်းပို့မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ရပါတယ်ပို့ပါတဲ့…သူလဲအားလုံးကိုသတင်းပို့ပြီးမှ လာတာပါလို့ပြောတယ်…
အဲဒီလိုပြောနေတုံးမှာဘဲ နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးက (၂)ယောက်ရောက်လာပြီး ဧည့်သည်(၂)ယောက် ကိုအကျိုးအကြောင်းမေးတော့ ကိုမောင်မောင်က သူသွားခဲ့ရပုံနဲ့ ခုထိအခြေအနေကိုရှင်းပြတယ်…ဒါနဲ့ကိုမောင် မောင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မသားစာကိုပါယူသွားပြီး ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်…ဒါနဲ့ဘဲကိုယ်လဲ ကိုမောင်မောင်နဲ့ စကားသိပ်မပြောလိုက်ရဘူး….ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာထင့်နေတာပေါ့…လိမ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ ဘာဖြစ် ဖြစ်ပေါ့ ….စေတနာနဲ့လာတဲ့သူတွေဆိုရင်အားနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့…ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေ…
ဒါနဲ့ကိုယ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ …ကဲ မင်းဘဲလိုက်ရမှာ…မင်းသားကိစ္စဘဲ…ငါ့တော့ကို မောင်မောင်က မလိုက်ရဘူးပြောတယ်…ဒါနဲ့ကိုယ်လဲလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…ကဲ ကိုယ်လိုက်ရင် ကိုယ့် ကိုဟိုဘက်ကသူပုန်က သတ်ပစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …မတတ်နိုင်ဘူးလေ…သတ်ပစ်လဲသတ်ပစ်…ဖမ်းလဲဖမ်းပါ စေ…ငါ့သားအသက်ရှင်ရေးအတွက် သွားကိုသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…
ကိုယ်လဲသူတို့ ဇီးကွက်မှတ်တိုင်နားမှာ နေတဲ့အကြောင်း သွားပြောပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်တယ်…အန်ကယ်ကြီးတို့က ဖေဖေါ်ဝါရီလမတိုင်ခင်ကတည်းက သိနေတယ်ဆိုတာ နောက်မှသိရတယ်.
စစ်တပ်ကဘဲဖမ်းမိလို့ နယ်စပ်တနေရာကနေခေါ်ပြီး မိဘထံပြန်အပ်ဖို့လား…ABSDF ကဖမ်းထားတာဆိုတော့…
ကိုယ့်သားကစပြီးလှုပ်ရှားကတည်းက ကျောင်းသားဖက်က ဒီမိုကရေစီရရှိဘို့အတွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါတယ်..
ပါတီထောင်ပြီးဒုဥက္ကဋ္ဌလုပ်တယ်…နောက် န၀တ အစိုးရကဖမ်းမှာစိုးလို့ တိမ်းရှောင်နေတယ်ဆိုတာ ဘဲ သိတယ်…ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာမသိဘူး…ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ န၀တ ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆို တော့ တောတွင်းတနေရာရောက်နေမှာဘဲလို့ထင်တယ်…နှစ်ကလည်း(၂)နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ သူ့အတွက် စွန့် လွှတ်ပြီး ပူပန်သောကတွေကို ဘုရားနဲ့ဖြေပြီးနေရတယ်… ဘုရားဖက်တော့ အသက်ရှည်ဆိုသလို ကိုယ်လဲ အရင် ကလို တပိန်ပိန် တလိန်လိန် မဟုတ်တော့ဘူး…..ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုရနေတာပေါ့လေ…
တနေ့တော့မသေရင်ပြန်တွေ့ရမှာဘဲလို့ ယူဆပြီးစိတ်ဖြေနေရတယ်…ဗေဒင်တို့အကြားအမြင်တို့မေး လိုက်ရင်လည်း အသက်ရှင်လျှက်ရှိတယ်…မကြာခင်သတင်းစကားဖြစ်စေ လူဖြစ်စေအဆက်အသွယ်ရမယ်…
သူ့အစ်မကြီးရှိတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်ကိုသွားပြောခိုင်းလိုက်တော့ ၀မ်းသာလွန်းလို့ သူလာခဲ့မယ်ဆိုတာပြောလိုက် တယ်… သတင်းအစအနပျောက်နေတဲ့သားဆီက စာလေးတစောင် ရောက်လာလို့ တအိမ်သားလုံး ၀မ်းသာမဆုံး တွေးတောမဆုံး ဖြစ်နေရတယ်….
ကိုယ်တို့ကျောင်းကလည်း မပိတ်သေးတော့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပေမယ့် ကျောင်းကိုသွား ရုံးကိုသွားနေရ တယ်…ရုံးမှာလဲဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စကရှိနေသေးတော့ ရုံးကိုအမြဲသွားနေရတယ်…ကိုယ့်ကိစ္စလဲလုပ်ရင်း၊ကျောင်းကိစ္စလဲ လုပ်ရင်း ပေါ့လေ… ရုံးရောက်တော့ အစ်မကြီးလိုခင်တဲ့ ဆရာမကြီးကိုပြောပြတော့ ညကBBC ကလည်းကျောင်း သားတွေအကြောင်း အသံလွှင့်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ ပိုပြီးစိတ်ပူနေတာပေါ့….ကိုမောင်မောင်ပြန်လာတာက ကြာပြီဆိုတော့ ဒီကြားထဲမှာများ သတ်များသတ်ပစ်လိုက်ပြီလား….အသက်မှရှိသေးရဲ့လားနဲ့ပူနေရတာပေါ့…
အမျိုးသားကလည်း သူရုံးမသွားခင် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးကဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက် လာတဲ့အကြောင်း….ဒီစာကိုရတဲ့အတွက်သွားပါလို့မတိုက်တွန်းကြောင်း…..မသွားပါနဲ့လို့လဲမပြောလိုကြောင်း…
လူမှုရေးကိစ္စဖြစ်နေတော့ သူတို့အနေနဲ့ဘာမှမပြောလိုကြောင်း တကယ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ဆီကို သတင်းပို့ပါလို့ ပြောသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ NATIONS သတင်းစာမှာ - ကျွန်မတို့ကလေး( ၇ ) ယောက်ထဲက(၃) ယောက်နဲ့ တစ်ခြားကလေး(၂)ယောက် (၅) ယောက်ပုံပါလာပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကို ရေးထားတဲ့ အကြောင်း ဓာတ်ပုံလည်းပြတယ်တဲ့…အဲဒီထဲကမိန်းကလေးက အန်ကယ်ကြီးသမီးဖြစ်နေတယ်…
ဒါနဲ့ကိုယ်တို့လင်မယားလည်း…မအိပ်နိုင်မစားနိုင်နဲ့ သားရဲ့စာသားရဲ့ကိစ္စကိုဘဲ အမျိုးမျိုးထင်ကြေးတွေ ပေးပြီး တစ်ညကုန်ရတော့တာပါဘဲ….
ဒီနေ့မှာလည်း ရုံးနဲ့ကျောင်းကိုဘဲဆက်သွားနေရတယ်…အမျိုးသားကိုလည်းသွားဘို့ကိစ္စ ၀ိုင်းပြီးငွေရှာ ပေးဘို့ပြောတယ်…သူလည်းမရှာတတ်ဘူးတဲ့…ပိုက်ဆံမရှိရင် မသွားနဲ့လို့လည်းပြောပြန်ရော…ဒါနဲ့ကိုယ်လည်း ကျောင်းနဲ့ရုံးကိုသွားတယ်….
အဲဒီနေ့လုပ်သားသတင်းစာထဲမှာ မကဒတ(မပ)ကကျောင်းသား(၈၀)ဖမ်းပြီး န၀တ ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲထာတဲ့အကြောင်း (၁၅)ဦးကိုသတ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို မိဘဆီအပ်မည့်သူနဲ့ သူတို့နဲ့ပြန်လက်တွဲမည့်သူ တွေကိုစီစစ်နေတယ် ဆိုတဲ့သတင်းလဲဖတ်ပြီးရော ရုံးကခွင့်ယူထားတဲ့လူက သူ့သားအတွက်အရမ်းစိတ်ပူသွားပြီး
ရုံးသွားတက်တယ်…ညနေကျတော့ ငွေ၃၀၀၀ကျပ် ကိုယ့်ကိုလာပေးတယ်…
အဲဒီနေ့မှာဘဲ မနက်ပိုင်း ၀ဏ္ဏဇော်အမေ ဒေါ်ရီရီခင်ဆီသွားတော့ သူအတော်အံ့သြနေတယ်…ကိုယ်ကသာ သူ့သားပါမှန်းသိတာကိုး…သူကကိုယ့်သားပါမှန်းမသိဘူး….ဒါနဲ့လိုက်ဘို့မလိုက်ဘို့မေးတော့ ဆွေမျိုးတစ်ချို့က မလိုက်နဲ့ တစ်ချို့ကလည်းလိုက်သွား…သမီးကလည်းမလိုက်စေချင်ဘူး…ငွေရေးကြေးရေးကလည်းရှိသေးတယ် တဲ့…ကိုယ်ပါမှန်း လိုက်မယ်မှန်းသိတော့ သူလိုက်မယ်တဲ့…အစကတော့မသိတဲ့သူတွေနဲ့ သွားရမှာဆိုတော့ သူလိုက်ဘို့စဉ်းစားနေရတယ်တဲ့…ကိုယ်လည်းသူပါတယ်ဆိုတော့ အားရှိသွားတာပေါ့….လမ်းမှာဘာကိစ္စဘဲဖြစ် ဖြစ် ကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်ဖေါ်ရတာပေါ့….
ညနေကျတော့အန်ကယ်ကြီးတို့လင်မယားရောက်လာကြတယ်…အတူသွားရမဲ့လူတွေရင်းနှီးအောင်လို့ ဆိုပြီး ခေါ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ သားတွေသမီးတွေရေးပေးလိုက်တဲ့စာကို လဲလှယ်ဖတ်ကြည့်တော့ လက်ရေးမတူ ပေမယ့် စာသားကတစ်ပုံစံတည်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်… ဒါဆိုတွေးရတာပေါ့လေ…အကြပ်ကိုင်ပြီးရေးခိုင်းတာ လား လို့တော့ မိဘတွေကတွေးကြတာပေါ့…
မိဘတိုင်းကသားသမီးတွေဟာ ဘာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာ သိတာဘဲ…ဒီလို န၀တ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်တယ်လို့ ရေးထားတာ လိမ်ညာပြီး ရေးတယ်ဆိုတာ အားလုံးကသိနေကြတယ်…သူတို့ရဲ့အသက်ဘေး ကြောင့်ရေးရတာဆိုတာကိုလည်း တွေးမိပါတယ်…
သွားဘို့ရက်ကိုလည်း ( ၁၁.၃.၁၉၉၂ ) ရက်နေ့သွားဘို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်…သားသမီးတွေကိုပထမ မွေးဖွားစဉ်က ဆေးရုံမှာအသက်စွန့်ပြီးမွေးခဲ့ရသလို ခုလဲသားသမီးတွေကို ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပေးကြရမှာ ဖြစ် တဲ့အကြောင်း ဒီတစ်ခါမွေးဖွားရတာက ပထမအကြိမ်မွေးဖွားတာထက် ခက်ခဲပြီး ပိုပြီး အသက်စွန့်ရမှာဖြစ်ကြောင်း
ကိုယ်ကလည်းမန္တလေးကို လုံးဝမရောက်ဖူးတော့ အန်ကယ်ကြီးတိုနဲ့တဲတာကအစ နေတာအဆုံး အတူ လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်…အန်ကယ်ကြီးကလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါ အထက်တန်းလက်မှတ်ဝယ်မယ်လို့ ပြောသွားတယ်…ကိုယ်တို့ကငွေရေးကြေးရေးကသူတို့လောက်အစဉ်မပြေတော့ ရိုးရိုးတန်းကဘဲလိုက်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်… အဲဒီအကြောင်း အမျိုးသားပြန်လာတော့ပြောပြတယ်… သူက အထက်တန်းကဘာမှပိုကုန်တာ မဟုတ်ဘူး… အထက်တန်းကဘဲသွားဆိုလို့အထက်တန်းကဘဲယူဘို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..
( ၆.၃.၁၉၉၂ ) နဲ့ ( ၇.၃.၁၉၉၂ ) မှာတော့ ကျောင်းကိစ္စ ရုံးကိစ္စနဲ့ဘဲအချိန်ကုန်တယ်…ကျောင်းကဆရာမ တွေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး လွှဲစရာရှိတာလွှဲ မှာစရာရှိတာမှာနဲ့ဘဲအချိန်ကုန်သွားတယ်…အိမ်ပြန်ရောက် တော့လည်း ကိုယ့်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ သားအတွက်ဓာတ်ပုံစီစဉ်ရတယ်…သားအတွက်လိုင်စင်ဓာတ်ပုံကမရှိတော့ ကျောင်းမှာ စာအုပ်ထုတ်တဲ့ကဒ်ပြားကပုံကိုဘဲကူးယူရတယ်…ကူးလဲပြီးရော ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ လုပ်သားကောလိပ်လို့ ပါနေတာ ကူးလိုက်တော့ လုပ်သားကပျက်ပြီး တပ်သားလို့ပေါ်နေတယ်…အလိုလိုကမှ န၀တ ထောက်လှမ်းရေး လို့စွပ်စွဲနေရတဲ့အထဲ ဓာတ်ပုံမှာတပ်သားလို့ပါနေတော့ ကတ်ကျေးနဲ့ညှပ်ပစ်လိုက်ရတယ်…
ဒီနေ့မှာဒေါ်ရီရီခင်အိမ်သွားပြီး လက်မှတ်ဝယ်ဘို့ကိစ္စရှိတာကြောင့် အန်ကယ်ကြီးအိမ်(3/C )ကန်ဘဲ့ကို သွားတော့ ကိုယ်တို့ရှေ့မှာတင် ကားတစ်စီးဝင်သွားတယ်…အထဲရောက်တော့ စမ်းချောင်းကဧည့်သည် (၂)ယောက် လည်းရောက်နေတယ်…အားလုံးတိုင်ပင်ကြပြီး ဟိုရောက်ရင် ဘယ်လိုပြော ဘယ်လိုနေ ဆိုတာတွေ ကိုအန်ကယ်ကြီးကပြောပြတယ်…စမ်းချောင်းကဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်တို့သားအမိလည်း လိုက်မယ်လို့သိရတယ်… လက်မှတ်ကို မနက်ဖြန်မနက်ဝယ်ရအောင် ဘူတာကြီးမှာဆုံဘို့ချိန်းခဲ့ကြတယ်…
ပြီးတော့မှကိုမောင်မောင်တဲတဲ့မြကန်သာဟိုတယ်ကို ဒေါ်ရီရီခင်နဲ့သွားခဲ့ကြတယ်…မတွေ့ခဲ့ရလို့စာရေး ထားခဲ့ရတယ်…ည၉နာရီဖုန်းထပ်ဆက်မှတွေ့ရတယ်…ကိုမောင်မောင်က ဦးဇော်ခင်သူတည်းတဲ့နေရာကို ဘယ်လို သိလဲမသိဘူး…ရောက်လာပြီးတော့…ဟိုတယ်ရှေ့ကနေ…မန္တလေးက MI နှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ဆိုပြီး
အော်နေတယ်တဲ့…ဆဲနေတယ်တဲ့…ချော့ခေါ်ပြီးအရက်နဲ့ဧည့်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့… အရက်ဖိုးကိုလည်း ခင်ဗျားက
မနက်၎နာရီ ရထားလက်မှတ်သွားတန်းစီရတယ်…လက်မှတ်တန်းစီတာကျော်ပြီးစီလို့ တရုပ်မ၃ယောက်နဲ့
စကားများရသေးတယ်…အားလုံးအတွက် အထက်တန်းကချည်းရတယ်…..သာယာဝတီကတစ်ယောက်လည်းပါ တယ်…..ပဲခူးကမိဘတစ်ယောက်ကသူ့အစီအစဉ်နဲ့သွားပြီး မန္တလေးကျမှဆုံမယ်လို့သိရတယ်…..လက်မှတ်ဝယ်
ပြီးမိဘတွေကခုမှသိရတာဆိုပေမဲ့ ဘ၀တူတွေဆိုပြီး ပိုပြီးခင်မင်မှုရကြတယ်…..
ရထားလက်မှတ်ရပြီးတာနဲ့ ကျောင်းမှာမိဘဆရာအသင်း အစည်းဝေးရှိလို့ သွားရတယ်…နာယက(ရ၀တ)
သွားရသေးတယ်…..ဆရာကြီးကိုဝင်တွေ့ပြီး သားကိစ္စသွားမယ့်အကြောင်းနဲ့ ခွင့်စာတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြ
တယ်…..ပြောပြီးရုံးမှာဆရာမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ထိုင်နေတုံး ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ခဏလိုက်ခဲ့ပါ…
ရင်ကလေးတွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးလို့ ပြောပြီး…အားလုံးအစဉ်ပြေမှာပါလို့ပြောတယ်…..ကျမကရုံးမှာ နေခဲ့ပြီး ဒေါ်ရီရီခင်ကိုတော့ ဓာတ်ပုံရွေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ မြို့ထဲကိုလိုက်ပို့လိုက်ကြတယ်…..
အိမ်ရောက်တော့ မနက်ခရီးထွက်ဘို့လိုအပ်တာတွေဝယ်ရတယ်…..ဒေါ်ရီရီခင်ကိုလည်း အိမ်လာအိပ်ဘို့
သမီးတွေကို သွားခေါ်ရမှာဆိုတော့ ၀မ်းသာနေကြတာပေါ့…..ပဲခူးကျော်တာနဲ့ဝဲယာတောင်တန်းကြီးတွေတွေ့ရ တယ်…..ပျဉ်းမနားကျော်တော့ကိုယ်မရောက်ဘူးသေးတဲ့ဒေသမို့…အသစ်အဆန်းတွေဖြစ်နေတယ်….မလှိုင်၊၀မ်း
တွင်းရောက်တော့မှောင်ပြီး ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး…..မန္တလေးရောက်တော့အန်ကယ်ကြီးတို့အဒေါ်အိမ်ကို သွားကြတယ်….ရေမီးအစုံနဲ့ဆိုတော့ တည်းရတာအစဉ်ပြေပါတယ်…..
ဆိုတော့ ပူးတဲ့ငွေသူ့ကိုအပ်ထားကြတယ်…..လားရှိုးလက်မှတ်ကို ကိုမောင်မောင်ဘဲ သွားဝယ်တယ်…..
ဇွတ်ပြောနေလို့ ခေါ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြောတယ်…..ကိုမောင်မောင်နဲ့အားလုံးကလည်း သက်ဆိုင်ရာမိဘတွေသာ
ခေါ်ခိုင်းတာမို့ လူပိုမခေါ်ခဲ့ဘို့မှာထားတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြပြီး စာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပေးပေးပါ့မယ်လို့ပြော
အန်ကယ်ကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံက သူတို့အဖိုးအဖွားလက်ထက်က လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ကျောင်း
ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေးကမှာတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်မြရင်ဝက်အူချောင်းတစ်ပိဿလည်း ၀ယ်ခဲ့ကြရတာ
မှတ်မိတယ်…ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးပြီး အ၀တ်၃စုံဘဲထည့်ထားပြီး မလိုတာတွေကို မန္တလေးမှာဘဲထားခဲ့ကြ တယ် ….အိမ်ရှင်တွေကိုဘုရားဖူးဆက်ထွက်မယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ရတယ်…..
ကအစမှာဟိုအထိလိုက်ဘို့ဘဲ…လူပိုမလိုက်ရဘူးဆိုလို့ မန္တလေးမှာကျန်ခဲ့တယ်…၁၆.၃.၉၂မှာအန်ကယ်ကြီး
မန္တလေးကစထွက်တော့ သားတွေနဲ့တွေ့ဘို့နီးပြီဆိုပြီးဝမ်းသာကြတာပေါ့…ကျောက်မဲမြို့နယ်ထဲရောက်
စိတ်မချလို့ အတန်တန်မှာတယ်…ကိုယ်တို့ကလည်းမိဘလိုသဘောထားပြီး ကောင်းအတူ ဆိုးအတူ ကူညီပြီး
မနက်၅း၀၀နာရီထိုးတော့ ကားဂိတ်သွားပြီး မူဆယ် လားရှိုး နမ့်ခမ်း ကားပေါ်တက်ကြတယ်…၅း၃၀မှာကား
စထွက်ပြီး လားရှိုးအထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ အစစ်ဆေးခံဘို့ ကားတွေတန်းစီစောင့်ကြရတယ်…စစ်ဆေးရေးအ
ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေက တစ်ကားပြီးတစ်ကားတက်ရှာလိုက် စီးတဲ့လူမှတ်ပုံတင်စစ်လိုက်နဲ့ ကိယ်တို့(၆)
ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူး…မူဆလင်ဆိုပေမယ့်နိုင်ငံသားကဒ်ကိုင်ထားတာပါ…..ကိုယ်တို့ကကားပေါ်က စောင့်နေတယ်…တစ်နာရီလောက်ကြာလာတော့ကားပေါ်ကသူတွေ ပွက်လောရိုက်ကုန်ရော…အချိန်မှီ ရောက်ချင်တယ်….သူ့ကိုထားခဲ့ပြီးကားထွက်ပါလို့ ပြောကြတယ်…ဒရိုင်ဘာကသဘောကောင်းပြီးစောင့်ပေး တယ်….ကိုမောင်မောင်ကထောက်လှမ်းရေး၉ကိုဖုန်းဆက်မေးတယ်…..ဗိုလ်ကြီးကမရှိတော့အားလုံး ကားပေါ်က ဆင်းနေခဲ့ကြရတယ်….ကားကဆက်ထွက်သွားတယ်…အစဉ်မပြေဖြစ်တော့ ၂၀ရက်နေ့အမှီဟိုကိုမရောက်မှာ
ဖုန်းဆက်၊ထောက်လှမ်းရေး၉ကိုဖုန်းဆက်နဲ့အလုပ်များသွားတယ်…တည်းခိုခန်းမှာ နေတုံး ၁း၀၀နာရီမှာ ထလရ၉
ကဗိုလ်ကြီးက အားလုံးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ သွားရတယ်…..ဗိုလ်ကြီးသုတဆွေကိုတွေ့တယ်…တပ်မှူးကိုလည်း
တင်ပြထားကြောင်း သွားမည့်သူအမည်နဲ့ သားတွေရဲ့အမည်ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်…မြို့နယ်မှူး(လ၀က)ကို လည်းဖုန်းဆက်တယ်…မနက်ဖြန်(၇)ဦးကိုလွှတ်လိုက်ဘို့ပြောလိုက်တယ်…..
ကိုယ်တို့(၇)ယောက်ကိုလူတွေက ဘယ်လိုထင်မလဲ…ဒီကုလားကမိန်းမ(၅)ယောက်ကိုနယ်စပ်ခေါ်သွားပြီး ဘာ
လုပ်မှာလဲ….မိန်းမ(၅)ယောက်ကလည်းအဖွားကြီးတွေဆိုတော့ဘာလုပ်တာပါလိမ့်ဆိုပြီး….ပြောကြမှာလို့ ဟာသ ပြောပြီးရီကြသေးတယ်….၀က်အူချောင်းတွေယူလာလို့အထစ်အငေါ့ဖြစ်တာလားလို့ တွေးမိကြသေးတယ်…
အန်တီကြီးကညဘက်ခေါပုတ်ကင်စားချင်တယ်ဆိုလို့ သွားစားကြတာ အန်တီကြီးပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်
ဒီနေ့တော့အားလုံးအစဉ်ပြေစွာနဲ့ ဆက်ထွက်ဖြစ်ကြတယ်…..သိန္နီလွန်ပြီး ကွတ်ခိုင်ရောက်တော့ ထမင်း စားကြတယ်…ကွတ်ခိုင်ကျော်တော့နမ့်ဖတ်ကာထဲရောက်တယ်…ဒီလိုနဲ့မူဆယ်ထဲဝင်လာတော့ လမ်းတွေအရမ်း
ကြီးက၁၃ဂဏန်းမကြိုက်လို့( A )လို့ပြောင်းရေးပေးကြတယ်…ကိုမောင်မောင်ကထလရ(၂၃)/ဆွယ်ကို သတင်း
ဖြတ်ပြီးနာရီဝက်လောက်သွားရတယ်… တရုပ်ပြည်ကြယ်ခေါင်ဂိတ်ကိုရောက်သွားတယ်… မူဆယ်နဲ့ကြယ်ခေါင်က မြေတစ်ဆက်တည်းဘာမှမခြားဘူး….နယ်ခြားကျောက်တိုင်လေးဘဲခြားထားတယ်…တရုပ်ပြည်ထဲရောက်တော့
မတူဘူး…..တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘေးအကာနိမ့်နိမ့်လေးတွေဘဲကာထားတယ်…ရှေ့တည့်တည့်မှာအကာလုံးဝမထားဘူး ညစ်ပတ်တာလည်းအလွန်ဘဲ…ရေလုံးဝမသုံးဘူး…..နောက်တစ်ကြိမ်မသွားချင်တော့ဘူး…..၆း၀၀နာရီထိုးတော့ ဂိတ်ဖွင့်တယ်…နေ့ကူးလက်မှတ်တစ်လှည့်စီသွားလုပ်ကြတယ်…..ပြီးတော့တရုပ်ကားနဲ့ရွှေလီကို
ဆက်ထွက် ခဲ့တယ်…. နာရီဝက်လောက်နေတော့ ရွှေလီမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့တံတားကိုဖြတ်ရတယ်…..နောက်တော့
ခြေကျိုးလက်ကျိုးမျက်စေ့ကန်းနဲ့ တွေ့ရမလား….ဟာ…ကျနော်တို့စစ်ရင်းနဲ့လက်လွန်သွားလို့ဆိုပြီး မြေပုံဘဲ တွေ့ရမလား….လားပေါင်းများစွာနဲ့တွေးရင်းလိုက်လာရတယ်….ဥက္ကဋ္ဌကလည်းခပ်တည်တည်နဲ့ ဖေါ်ဖေါ်ရွေရွေ
တစ်ယောက်က(၅၀၁)ရင်းမှူး သိုက်ထွန်းဦးဆိုတာ သိရတယ်….သူလည်းတလမ်းလုံးစကားမပြောဘဲ လိုက်လာတာ….ဆမားရောက်မှကိုယ့်ကို အန်တီက ကိုရဲအမေလား….ကိုရဲဖမ်းတုံးကသူမျက်ရည်ကျရတဲ့အ ကြောင်း ….ကိုရဲနဲ့သူနဲ့အတူအိပ် အတူစား နေခဲ့ရတဲ့အကြောင်း …..ရှေ့တန်းသွားလည်း အတူတူဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ….သူကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကလာခဲ့တဲ့အကြောင်း…..နဲ့MASTER တက်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း
ကိုရဲပြောပြလို့မခိုင်ကို အာယုတို့အတန်းကလို့သိရကြောင်း သူတို့ကိုစာဂျပိုးတွေမို့သိပ်မသိကြောင်း
၀င်းဝင်းကြိုင်ကိုတော့ သိကြောင်း ပြောပြတယ်…..အာယုလည်း အမေရိကားကိုပညာသင်ပါသွားကြောင်းပြောပြ
မေးတော့ ဟိုတလောကထုံဖြစ်လို့ဆေးထိုးရတဲ့အကြောင်း သူတို့ကိုဘယ်လိုမှမထင်ပါနဲ့တဲ့…စိတ်မရှိပါနဲ့တဲ့….
၀ဏ္ဏဇော်အကြောင်းလည်းပြောပြတယ်…..ဒီလိုနဲ့ဆက်ထွက်လာကြတာ ရှားဟော့ပါဆိုတဲ့ရွာ ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်
ကချင်ဒေသဖြစ်တဲ့ လိုင်စင်စခန်းကိုဝင်လာခဲ့တယ်…..KIA ဂိတ်ကိုပထမတွေ့ရတယ်….KIA ရဲမေတွေစောင့်တယ်.
ကားဝင်ခွင့်ပေးတယ်….ကိုက်၅၀လောက်သွားပြီးတော့ ABSDF ဂိတ်ကိုရောက်တယ်….မိန်းကလေးစောင့်နေတာ
မနက်ကျတော့ဥက္ကဋ္ဌလည်းတဲပေါ်တက်လာတယ်….အေးအေးဆေးဆေး အားမနာဘဲနေကြဘို့ ကလေး
အဲဒါအပြင်ထွက်ကြည့်ပြီး ကလေးတွေကိုဘယ်မှာထားသလဲမေးတော့ ကိုယ်တို့ရှေ့က အလံတိုင်ရှိတဲ့
နေတုံး သက်လင်း(တာတီးပိုး)နဲ့ဖိုးနှောင်းတို့ကတစ်လှည့်စီ လာစောင့်ကြတယ်….သူတို့ကိုလည်းသားတွေအ
ကြောင်းမေးရတာပေါ့….ကိုရဲဆိုရင်ထုံဖြစ်လို့ ခြေတွေလက်တွေမြှောက်မရလို့ ဆေးထိုးလိုက်မှပျောက်သွားတယ်
သေနတ်နဲ့ပစ်လိုက်တာဆိုတာကို…ဒီ၁၇နှစ်သားသာရှိသေးတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်စုက တပ်သားတာတီးပိုးက
သူ့ပြောကြားချက်အရ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီး လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားတာ….အဲဒီကျောင်း
သားက ဂါထာမန္တယားတွေရွတ်တော့ ကြိုးပြေသွားတာကို….မင်းဂါထာကတယ်အစွမ်းထက်ပါလား….နောက်မင်း
ကြိုးမပြေရအောင် ရွတ်ချင်တဲ့ဂါထာရွတ်ဆိုပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကပ်ပြီး လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဘက်ကို
ဓါးမြှောင်နဲ့ထိုးစိုက်ပြီး တစ်ညလုံးပစ်ထားလိုက်တာ သွေးလွန်ပြီးသေသွားတယ်လို့ ဂုဏ်ယူပြီးပြောတာ ရွံရှာစွာနဲ့ဘဲ နားထောင်နေရတယ်…..
မနက်၉း၀၀နာရီလောက် မနက်စာထမင်းကျွေးတယ်….မုန်ညင်းနဲ့အာလူးကအမြဲပါတယ်…၀က်သား အာလူး ၊ အမဲသားအာလူး၊ ကြက်ဥကြော်တစ်ပတ်(၂)ခါလောက်စားရတယ်….. ကျန်တာကမုန်ညင်းကို ချဉ်ရည်ချက်လိုက် ကြော်လိုက်၊ဂေါ်ဖီကြော်၊ မြေပဲကြော်၊အမျိုးမျိုးကို ရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင်ချက်ကျွေးတတ်တဲ့
အေးကလည်းအေးတော့ ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီး မီးဖိုမှာမီးလှုံရင်း စကားပြောရတယ်….ရန်ကုန်မှာနွေဖြစ်
မနွေးလာဘူး…..ထုတ်တန်းမှာဝါးလုံးတန်းပြီး တန်းမှာသံကြိုးတချောင်းချပြီး အဖျားမှာချိတ်တစ်ခုတပ်ပြီး ရေနွေး
ရေးအတွက် သက်စွန့်ဆံဖျား သူပုန်စခန်းလာပြီး သူတို့ဓလေ့ သူတို့ထုံးစံအတိုင်း နေရတာလို့ အောင့်မေ့မိ
ညနေစာစားပြီးတော့ ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်ကို ဘိုဘိုနဲ့တွေ့ဘို့ခေါ်တယ်…..မကြာဘူးအရီကို ၀ဏ္ဏဇော်နဲ့
(၃)နှစ်ကျော်လောက် သားသမီးတွေနဲ့မတွေ့ရတော့တာ ခုမှပြန်တွေ့ရတော့ ဝမ်းသာဝမ်းနဲဖြစ်ကြတာပေါ့….
အန်တီကြီးကနှလုံးရောဂါရှိတော့ စိတ်ထိမ်းပါလို့မှာရတယ်…..မမြင့်ကြည်နဲ့အရီကို သူတို့သားတွေနဲ့
ပေးတွေ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌ တဲမှာ VIDEO ကြည့်ဘို့ ခေါ်သွားတယ်တဲ့….အန်တီကြီးနဲ့အန်တီစန်းကည၁၀း၀၀နာရီ
ကျော်တဲ့အထိပြန်မလာဘူး…တဲမှာက ကိုယ်ရယ် ကိုမောင်မောင်ရယ်….ရဲမေ၂ယောက်ရယ်ကျန်တယ်….
ကျောင်းသားရဲဘော်တစ်ယောက်က အန်တီစိန်ရေဆိုပြီးလာခေါ်တယ်…..မှောင်မဲမဲမှာသူတို့ကိုတွဲပြီး တောင်အောက်ဆင်းလိုက်သွားတယ်..အောက်ရောက်တော့မနေ့ကတည်းကကွဲသွားတဲ့ဦးအေးနိုင်ကိုတွေ့တယ်…
၀င်လာလာချင်းမိဘတွေကို ထိုင်ကန်တော့ကြတယ်….သားတို့မေမေတို့လာမှန်းသိလားဆိုတော့ မနက်ကသိ
တယ်တဲ့…ခုလည်းသူများတွေလာလာခေါ်လို့ သူတို့ကိုလည်းလာခေါ်မှာဘဲဆိုပြီး စောင့်နေကြတာတဲ့….
နေဒွန်းတို့သက်ထွန်းတို့ပေါ့……သူတို့ရှေ့မှာဘဲ….ကဲ မင်းတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေ မင်းတို့မိဘတွေကိုပြော
သားက သူန၀တထောက်လှမ်းရေးအလုပ်ကို ၁၉၈၅ထဲကလုပ်တာတဲ့….ငွေယားတောင်ကိုဗိုလ်သင်တန်း
ဖို့ အဖေကဆက်သွယ်ပေးတာ….ဘဏ်မှာလုပ်တာက ထလရ အလုပ်ကိုကာဘာယူဘို့လုပ်တာ….လစာ၅၅၀ ကျပ်ရတာကိုလည်း အမေမသိအောင် သုံးပစ်တာတဲ့…..
သူပြောတာတွေနားထောင်ပြီး ကြောက်လို့ လန့်လို့ လိမ်ပြီးပြောတဲ့ လိမ်စဉ်ဇာတ်လမ်းဆိုတာ…ကိုယ့်ရင်
ထဲမှာသိနေတယ်….ယုံလည်းမယုံဘူး…ရင်ထဲမှာ သရောသရီရီနေရတယ်…. တစ်လျှောက်လုံးလည်းVIDEO က
ရိုက်နေတယ်….ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်….သားကိုမေမေသိတာက ကျောင်းသားအရေးကိစ္စနဲ့ ဒီမို
အဲဒီတော့သန်းဇော်က ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာ မိဘတွေမသိဘဲ လုပ်ခိုင်းတာဘဲ….ဘယ်မိဘသိမလဲလို့ပြော
တယ်…..ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ငါ့သားဟာ န၀တ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဖူး….ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့
အချိန်မရွေးသတ်လို့ရတဲ့ လက်နက်တွေရှိတယ်….သူတို့လက်ခုတ်ထဲကရေဖြစ်နေတော့ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေရတယ်…..
သားကသူတို့ဘက်လှည့်ပြီး ကျနော်ဘဲအကြီးဆုံးရှိတော့တာ….အမေအဖေတို့ကိုလုပ်ကျွေးဘို့ ပြန်လိုက်သွား
အဲဒါပြောဆိုပြီးတော့ သူ့ကိုလည်းထောင်ထဲပြန်ထည့်….ကိုယ်တို့လည်းတောင်ကုန်းပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ ရတယ်....တဲကိုပြန်ရောက်တော့ ၀ိုင်းမေးကြတာပေါ့…..ကလေးတွေအားလုံးကပြန်မယ်ပြောတဲ့အကြောင်း…
အရ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်မှန်းသိရပါတယ်….နောက်နောင်ကို မလုပ်စေရပါဘူး….ဒီကိုလာတာလည်းန၀တ က
၀န်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရတယ်….အားလုံးလည်း ဒီစာသားအတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရတာပါ…..
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 4:53 AM2comments:
ABSDFမြောက်ပိုင်းသတ်ဖြတ်မှုများနှင့်မိခင်တစ်ဦး၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း-အပိုင်း(၁) by Ko Lin Wai Aung on Tuesday, March 6, 2012 at 6:00pm · ( ၃.၃.၁၉၉၂ ) ဒီနေ့ဒီရက်ဟာဖြင့် ကိုယ့်အဖို့ ဘယ်လိုမှမျှော်မှန်း မထားမိခဲ့တဲ့ အရာတခုကို တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ မထင်မိခဲ့ပါဘူး။နံက်၉နာရီအရောက် အလက(၄) ကို စတုတ္ထတန်းအဖြေလွှာစစ်ဆေးဘို့ အတွက်အိမ်က ထွက်လာခဲ့တယ်…ကျောင်းရောက်တော့ကိုယ် စစ်ဆေးရမဲ့ ENGLISH ဘာသာရပ်အတွက် နံပါတ်၁+၂+၃ ကိုစစ်ဆေးရတယ်….ဒီနေ့မှာလဲကျောင်းအလုပ်တွေက ဆုံနေတော့..ဒီကပြီးရင် အခြေခံပညာသွားဘို့ ချိန်းထား တာလဲရှိတာနဲ့ ကိုယ်စစ်ရမဲ့နံပါတ်တွေအပြီးစစ်ဆေးပြီးရင် နေ့လည်တစ်နာရီလောက် အခြေခံပညာသွားဘို့ အုပ်စုခေါင်းဆောင် ဆရာမကြီးကိုခွင့်ပန်လိုက်တယ်….ဆရာမကြီးကလည်း ခွင့်ပြုတယ်… ဒါနဲ့နေ့လည်တစ်နာရီမှာကိစ္စပြီးပြီမို့ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကို ဆိုက်ကားနဲ့ထွက်လာလိုက်တယ်… ရုံးရှေ့လဲရောက်ရော ကိုယ့်ကျောင်းကအထွေထွေလုပ်သားနဲ့ အမက(၁၆)ကအထွေထွေလုပ်သား(၂)ယောက် ထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်…တွေ့တွေ့ချင်းဘဲကိုယ့်ကျောင်းက အထွေထွေလုပ်သားက ဆရာမကြီးအိမ်က စာလာပေးတယ်ဆိုပြီး စာထုတ်ပေးတယ်… အိမ်ကစာပေးလာတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲထိတ်သွားတာပေါ့… စာကိုထုတ်ဖတ်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်း ဆရာမကြီးက ရေးပေးလိုက်တဲ့စာ…အိမ်မှာဧည့်သည်နှစ်ယောက် ရောက်နေလို့ အမြန်ပြန်လာဘို့….နောက်ပြီးသားကိစ္စဆိုတာလဲပါတယ်… ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ သားဆီကလူကြုံလာတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဆိုက်ကား ငှားပြီး အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာတယ်…ရုံးကိုလဲကိုယ့်အထွေထွေလုပ်သားနဲ့ဘဲ အခြေခံပညာမသွားတော့ဘူးလို့ ပြောခိုင်းလိုက်တယ်….အိမ်ကိုကားစီးသွားရင်တစ်ကျပ်ပဲကုန်မယ်ဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ ကားစောင့်ရင်ကြာမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး ဆိုက်ကားငှားစီးသွားတာ… ဆိုက်ကားကလဲနှေးလိုက်တာ….ရောက်ချင်ဇောနဲ့ဆင်းပြီးတောင် ပြေးချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်…နောက်မှဘဲ အချိန်တန်တော့ရောက်မှာဘဲဆိုပြီး ကြိတ်မှိတ်ပြီးလိုက်လာတယ်… ဒါနဲ့အိမ်နားရောက်လာတယ်…အိမ်ကိုအမြန်ပြေးဝင်လာတာပေါ့… အိမ်ထဲကိုမ၀ံ့မရဲနဲ့ဝင်လာတော့ ကိုယ့်အမျိုးသားနဲ့ ဧည့်သည်(၂)ယောက်တွေ့ရတယ်…ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်အမျိုးသားကို ရှင်ကဘယ်လိုရာက်နေတာလဲမေးတော့ မင်းရဲ့သမီးစုနန္ဒာလွင် ဖုန်းဆက်လို့ ပြန်လာရတာတဲ့. ကဲမင်းသားရေးလိုက်တဲ့စာဖတ်အုံးဆိုတော့ ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကို နှုတ်မဆက်မိဘဲ စာကိုအလောတ ကြီး ဖတ်လိုက်တယ်… စာထဲမှာက…အဖေနဲ့အမေတဲ့…ကျွန်တော်ဟာ န၀တ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်မိလို့ ကျွန်တော့်ကို ကျောင်း သားတပ်မတော်က ဖမ်းထားပါတယ်တဲ့…အဲဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့အသက်ရှင်ရေးအတွက် အဖေနဲ့အမေ တယောက် ယောက်လာရောက်အာမခံပြီးခေါ်မှ အသက်ချမ်းသာရမှာလို့ သူရှိရာတပ်စခန်းကို အမြန်ဆုံးလိုက်လာဘို့ ခေါ်တဲ့ စာဖြစ်နေတယ်… ဒါနဲ့ကိုယ်လဲအရမ်းကို စိတ်တွေထူပူလာပြီး ဒီစာကိုဘယ်လိုရတာလဲ…ဘယ်သူကပေးလိုက်တာလဲ မေးတော့… စောစောကဧည့်သည်နှစ်ယောက်ထဲက ကိုမောင်မောင်ဆိုတဲ့သူက သူပြီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလက သူ့ညီလဲ အဲဒီထဲရောက်နေတာ အရဲစွန့်သွားတာ ဟိုရောက်တော့ကျောင်းသား(၈၀)ကျော်ကိုဖမ်းထားပြီး န၀တ ထောက် လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲပြီးတော့ (၁၅) ယောက်ကိုသတ်လိုက်ကြတယ်…ကျန်တဲ့(၆၅)ယောက်ထဲက စီစစ်ပြီး မိဘလက် ထဲပြန်အပ်သင့်တဲ့သူကို ပြန်အပ်မယ်…သူတိုနဲ့လက်တွဲရမယ့်လူကို ဆက်ပြီးလက်တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ သူ့ညီအပါ အ၀င် ကျွန်မတို့မိဘ(၆)ဦးနဲ့ ပေါင်း(၇)ဦးကိုခေါ်ပေးပါဆိုလို့ ဒီစာနဲ့အတူလာရတဲ့အကြောင်း စခန်းကို(၂၀)မတ် အရောက်သွားရမဲ့အကြောင်း လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲမန္တလေးကို (၁၂.၃.၉၂) အရောက်လာဘို့အကြောင်း ပြောပြီး သူ့လိပ်စာနဲ့ သူ့ကိုမယုံမှာစိုးလို့ မန္တလေးထောက်လှမ်းရေးကဗိုလ်ကြီးနာမည်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်… လှမ်းပြီးမေးကြည့်ပါတဲ့…နောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအတွက်အ၀တ်အစား ကိုယ်တို့လိုက်မဲ့ သူတွေအတွက် အနွေးထည် ခြေအိပ် လက်အိပ် ခေါင်းစွပ်ကစ လုံလုံလောက်လောက်ယူခဲ့ဘို့ အကြောင်းနဲ့…. ရန် ကုန်ကကိုယ်နဲ့ဘ၀တူလိပ်စာတွေလဲပေးခဲ့တယ်…ကိုယ်လဲဒါဖြင့် နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးကို သတင်းပို့မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ရပါတယ်ပို့ပါတဲ့…သူလဲအားလုံးကိုသတင်းပို့ပြီးမှ လာတာပါလို့ပြောတယ်… အဲဒီလိုပြောနေတုံးမှာဘဲ နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးက (၂)ယောက်ရောက်လာပြီး ဧည့်သည်(၂)ယောက် ကိုအကျိုးအကြောင်းမေးတော့ ကိုမောင်မောင်က သူသွားခဲ့ရပုံနဲ့ ခုထိအခြေအနေကိုရှင်းပြတယ်…ဒါနဲ့ကိုမောင် မောင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မသားစာကိုပါယူသွားပြီး ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်…ဒါနဲ့ဘဲကိုယ်လဲ ကိုမောင်မောင်နဲ့ စကားသိပ်မပြောလိုက်ရဘူး….ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာထင့်နေတာပေါ့…လိမ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ ဘာဖြစ် ဖြစ်ပေါ့ ….စေတနာနဲ့လာတဲ့သူတွေဆိုရင်အားနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့…ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေ… ဒါနဲ့ကိုယ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ …ကဲ မင်းဘဲလိုက်ရမှာ…မင်းသားကိစ္စဘဲ…ငါ့တော့ကို မောင်မောင်က မလိုက်ရဘူးပြောတယ်…ဒါနဲ့ကိုယ်လဲလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…ကဲ ကိုယ်လိုက်ရင် ကိုယ့် ကိုဟိုဘက်ကသူပုန်က သတ်ပစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …မတတ်နိုင်ဘူးလေ…သတ်ပစ်လဲသတ်ပစ်…ဖမ်းလဲဖမ်းပါ စေ…ငါ့သားအသက်ရှင်ရေးအတွက် သွားကိုသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်… အဲဒါနဲ့ဘဲ ကန်ဘဲ့လမ်းက အန်ကယ်ကြီးရောက်လာတယ်… စာလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ သွားရင်အား လုံးတိုင်ပင်ပြီး သွားကြဘို့လာပြောတယ်…၀ဏ္ဏဇော်အိမ်ကိုလာရှာတာ မတွေ့သေးတဲ့အကြောင်းပြောတယ်… ကိုယ်လဲသူတို့ ဇီးကွက်မှတ်တိုင်နားမှာ နေတဲ့အကြောင်း သွားပြောပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်တယ်…အန်ကယ်ကြီးတို့က ဖေဖေါ်ဝါရီလမတိုင်ခင်ကတည်းက သိနေတယ်ဆိုတာ နောက်မှသိရတယ်. ကိုမောင်မောင်လဲ သာယာဝတီနဲ့ပဲခူးကမိဘတွေဆီ ဆက်ပြီးသွားရမှာဆိုတဲ့အကြောင်း သိရတယ်… စာရတဲ့နေ့ကကိုယ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက် မအိပ်နိုင်ကြဘူး….သားဆီကစာအကြောင်းဘဲစဉ်းစားနေကြတယ်.. စစ်တပ်ကဘဲဖမ်းမိလို့ နယ်စပ်တနေရာကနေခေါ်ပြီး မိဘထံပြန်အပ်ဖို့လား…ABSDF ကဖမ်းထားတာဆိုတော့… ကိုယ့်သားကစပြီးလှုပ်ရှားကတည်းက ကျောင်းသားဖက်က ဒီမိုကရေစီရရှိဘို့အတွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါတယ်.. ပါတီထောင်ပြီးဒုဥက္ကဋ္ဌလုပ်တယ်…နောက် န၀တ အစိုးရကဖမ်းမှာစိုးလို့ တိမ်းရှောင်နေတယ်ဆိုတာ ဘဲ သိတယ်…ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာမသိဘူး…ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ န၀တ ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆို တော့ တောတွင်းတနေရာရောက်နေမှာဘဲလို့ထင်တယ်…နှစ်ကလည်း(၂)နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ သူ့အတွက် စွန့် လွှတ်ပြီး ပူပန်သောကတွေကို ဘုရားနဲ့ဖြေပြီးနေရတယ်… ဘုရားဖက်တော့ အသက်ရှည်ဆိုသလို ကိုယ်လဲ အရင် ကလို တပိန်ပိန် တလိန်လိန် မဟုတ်တော့ဘူး…..ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုရနေတာပေါ့လေ… တနေ့တော့မသေရင်ပြန်တွေ့ရမှာဘဲလို့ ယူဆပြီးစိတ်ဖြေနေရတယ်…ဗေဒင်တို့အကြားအမြင်တို့မေး လိုက်ရင်လည်း အသက်ရှင်လျှက်ရှိတယ်…မကြာခင်သတင်းစကားဖြစ်စေ လူဖြစ်စေအဆက်အသွယ်ရမယ်… လို့ဟောထားတော့ ငါ့သားတော့မသေသေးဘူး လို့ဆိုပြီး စိတ်ကိုဖြေနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီစာကိုရလာတော့ အိပ်မ ပျော် စားမ၀င်နဲ့ တိုင်ပင်လိုက် ဆွေးနွေးလိုက်နဲ့ အဲဒီညကအချိန်ကုန်တာပါဘဲ…. သူ့အစ်မကြီးရှိတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်ကိုသွားပြောခိုင်းလိုက်တော့ ၀မ်းသာလွန်းလို့ သူလာခဲ့မယ်ဆိုတာပြောလိုက် တယ်… သတင်းအစအနပျောက်နေတဲ့သားဆီက စာလေးတစောင် ရောက်လာလို့ တအိမ်သားလုံး ၀မ်းသာမဆုံး တွေးတောမဆုံး ဖြစ်နေရတယ်…. ( ၄.၃.၁၉၉၂ ) ကိုယ်တို့ကျောင်းကလည်း မပိတ်သေးတော့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပေမယ့် ကျောင်းကိုသွား ရုံးကိုသွားနေရ တယ်…ရုံးမှာလဲဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စကရှိနေသေးတော့ ရုံးကိုအမြဲသွားနေရတယ်…ကိုယ့်ကိစ္စလဲလုပ်ရင်း၊ကျောင်းကိစ္စလဲ လုပ်ရင်း ပေါ့လေ… ရုံးရောက်တော့ အစ်မကြီးလိုခင်တဲ့ ဆရာမကြီးကိုပြောပြတော့ ညကBBC ကလည်းကျောင်း သားတွေအကြောင်း အသံလွှင့်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ ပိုပြီးစိတ်ပူနေတာပေါ့….ကိုမောင်မောင်ပြန်လာတာက ကြာပြီဆိုတော့ ဒီကြားထဲမှာများ သတ်များသတ်ပစ်လိုက်ပြီလား….အသက်မှရှိသေးရဲ့လားနဲ့ပူနေရတာပေါ့… အမျိုးသားကလည်း သူရုံးမသွားခင် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးကဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက် လာတဲ့အကြောင်း….ဒီစာကိုရတဲ့အတွက်သွားပါလို့မတိုက်တွန်းကြောင်း…..မသွားပါနဲ့လို့လဲမပြောလိုကြောင်း… လူမှုရေးကိစ္စဖြစ်နေတော့ သူတို့အနေနဲ့ဘာမှမပြောလိုကြောင်း တကယ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ဆီကို သတင်းပို့ပါလို့ ပြောသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ NATIONS သတင်းစာမှာ - ကျွန်မတို့ကလေး( ၇ ) ယောက်ထဲက(၃) ယောက်နဲ့ တစ်ခြားကလေး(၂)ယောက် (၅) ယောက်ပုံပါလာပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကို ရေးထားတဲ့ အကြောင်း ဓာတ်ပုံလည်းပြတယ်တဲ့…အဲဒီထဲကမိန်းကလေးက အန်ကယ်ကြီးသမီးဖြစ်နေတယ်… ဒါနဲ့ကိုယ်တို့လင်မယားလည်း…မအိပ်နိုင်မစားနိုင်နဲ့ သားရဲ့စာသားရဲ့ကိစ္စကိုဘဲ အမျိုးမျိုးထင်ကြေးတွေ ပေးပြီး တစ်ညကုန်ရတော့တာပါဘဲ…. (၅.၄.၁၉၉၂)-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဒီနေ့မှာလည်း ရုံးနဲ့ကျောင်းကိုဘဲဆက်သွားနေရတယ်…အမျိုးသားကိုလည်းသွားဘို့ကိစ္စ ၀ိုင်းပြီးငွေရှာ ပေးဘို့ပြောတယ်…သူလည်းမရှာတတ်ဘူးတဲ့…ပိုက်ဆံမရှိရင် မသွားနဲ့လို့လည်းပြောပြန်ရော…ဒါနဲ့ကိုယ်လည်း ကျောင်းနဲ့ရုံးကိုသွားတယ်…. အဲဒီနေ့လုပ်သားသတင်းစာထဲမှာ မကဒတ(မပ)ကကျောင်းသား(၈၀)ဖမ်းပြီး န၀တ ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲထာတဲ့အကြောင်း (၁၅)ဦးကိုသတ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို မိဘဆီအပ်မည့်သူနဲ့ သူတို့နဲ့ပြန်လက်တွဲမည့်သူ တွေကိုစီစစ်နေတယ် ဆိုတဲ့သတင်းလဲဖတ်ပြီးရော ရုံးကခွင့်ယူထားတဲ့လူက သူ့သားအတွက်အရမ်းစိတ်ပူသွားပြီး ရုံးသွားတက်တယ်…ညနေကျတော့ ငွေ၃၀၀၀ကျပ် ကိုယ့်ကိုလာပေးတယ်… ငါ့သားဆီလိုက်သွားဖြစ်အောင်လိုက်သွားတဲ့…သားကိုအပါခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးမှာတယ်… အဲဒီနေ့မှာဘဲ မနက်ပိုင်း ၀ဏ္ဏဇော်အမေ ဒေါ်ရီရီခင်ဆီသွားတော့ သူအတော်အံ့သြနေတယ်…ကိုယ်ကသာ သူ့သားပါမှန်းသိတာကိုး…သူကကိုယ့်သားပါမှန်းမသိဘူး….ဒါနဲ့လိုက်ဘို့မလိုက်ဘို့မေးတော့ ဆွေမျိုးတစ်ချို့က မလိုက်နဲ့ တစ်ချို့ကလည်းလိုက်သွား…သမီးကလည်းမလိုက်စေချင်ဘူး…ငွေရေးကြေးရေးကလည်းရှိသေးတယ် တဲ့…ကိုယ်ပါမှန်း လိုက်မယ်မှန်းသိတော့ သူလိုက်မယ်တဲ့…အစကတော့မသိတဲ့သူတွေနဲ့ သွားရမှာဆိုတော့ သူလိုက်ဘို့စဉ်းစားနေရတယ်တဲ့…ကိုယ်လည်းသူပါတယ်ဆိုတော့ အားရှိသွားတာပေါ့….လမ်းမှာဘာကိစ္စဘဲဖြစ် ဖြစ် ကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်ဖေါ်ရတာပေါ့…. ညနေကျတော့အန်ကယ်ကြီးတို့လင်မယားရောက်လာကြတယ်…အတူသွားရမဲ့လူတွေရင်းနှီးအောင်လို့ ဆိုပြီး ခေါ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ သားတွေသမီးတွေရေးပေးလိုက်တဲ့စာကို လဲလှယ်ဖတ်ကြည့်တော့ လက်ရေးမတူ ပေမယ့် စာသားကတစ်ပုံစံတည်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်… ဒါဆိုတွေးရတာပေါ့လေ…အကြပ်ကိုင်ပြီးရေးခိုင်းတာ လား လို့တော့ မိဘတွေကတွေးကြတာပေါ့… မိဘတိုင်းကသားသမီးတွေဟာ ဘာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာ သိတာဘဲ…ဒီလို န၀တ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်တယ်လို့ ရေးထားတာ လိမ်ညာပြီး ရေးတယ်ဆိုတာ အားလုံးကသိနေကြတယ်…သူတို့ရဲ့အသက်ဘေး ကြောင့်ရေးရတာဆိုတာကိုလည်း တွေးမိပါတယ်… သွားဘို့ရက်ကိုလည်း ( ၁၁.၃.၁၉၉၂ ) ရက်နေ့သွားဘို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်…သားသမီးတွေကိုပထမ မွေးဖွားစဉ်က ဆေးရုံမှာအသက်စွန့်ပြီးမွေးခဲ့ရသလို ခုလဲသားသမီးတွေကို ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပေးကြရမှာ ဖြစ် တဲ့အကြောင်း ဒီတစ်ခါမွေးဖွားရတာက ပထမအကြိမ်မွေးဖွားတာထက် ခက်ခဲပြီး ပိုပြီး အသက်စွန့်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်… ကိုယ်ကလည်းမန္တလေးကို လုံးဝမရောက်ဖူးတော့ အန်ကယ်ကြီးတိုနဲ့တဲတာကအစ နေတာအဆုံး အတူ လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်…အန်ကယ်ကြီးကလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါ အထက်တန်းလက်မှတ်ဝယ်မယ်လို့ ပြောသွားတယ်…ကိုယ်တို့ကငွေရေးကြေးရေးကသူတို့လောက်အစဉ်မပြေတော့ ရိုးရိုးတန်းကဘဲလိုက်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်… အဲဒီအကြောင်း အမျိုးသားပြန်လာတော့ပြောပြတယ်… သူက အထက်တန်းကဘာမှပိုကုန်တာ မဟုတ်ဘူး… အထက်တန်းကဘဲသွားဆိုလို့အထက်တန်းကဘဲယူဘို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.. ( ၆.၃.၁၉၉၂ ) နဲ့ ( ၇.၃.၁၉၉၂ ) မှာတော့ ကျောင်းကိစ္စ ရုံးကိစ္စနဲ့ဘဲအချိန်ကုန်တယ်…ကျောင်းကဆရာမ တွေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး လွှဲစရာရှိတာလွှဲ မှာစရာရှိတာမှာနဲ့ဘဲအချိန်ကုန်သွားတယ်…အိမ်ပြန်ရောက် တော့လည်း ကိုယ့်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ သားအတွက်ဓာတ်ပုံစီစဉ်ရတယ်…သားအတွက်လိုင်စင်ဓာတ်ပုံကမရှိတော့ ကျောင်းမှာ စာအုပ်ထုတ်တဲ့ကဒ်ပြားကပုံကိုဘဲကူးယူရတယ်…ကူးလဲပြီးရော ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ လုပ်သားကောလိပ်လို့ ပါနေတာ ကူးလိုက်တော့ လုပ်သားကပျက်ပြီး တပ်သားလို့ပေါ်နေတယ်…အလိုလိုကမှ န၀တ ထောက်လှမ်းရေး လို့စွပ်စွဲနေရတဲ့အထဲ ဓာတ်ပုံမှာတပ်သားလို့ပါနေတော့ ကတ်ကျေးနဲ့ညှပ်ပစ်လိုက်ရတယ်… ( ၈.၃.၁၉၉၂ ) ဒီနေ့မှာဒေါ်ရီရီခင်အိမ်သွားပြီး လက်မှတ်ဝယ်ဘို့ကိစ္စရှိတာကြောင့် အန်ကယ်ကြီးအိမ်(3/C )ကန်ဘဲ့ကို သွားတော့ ကိုယ်တို့ရှေ့မှာတင် ကားတစ်စီးဝင်သွားတယ်…အထဲရောက်တော့ စမ်းချောင်းကဧည့်သည် (၂)ယောက် လည်းရောက်နေတယ်…အားလုံးတိုင်ပင်ကြပြီး ဟိုရောက်ရင် ဘယ်လိုပြော ဘယ်လိုနေ ဆိုတာတွေ ကိုအန်ကယ်ကြီးကပြောပြတယ်…စမ်းချောင်းကဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်တို့သားအမိလည်း လိုက်မယ်လို့သိရတယ်… လက်မှတ်ကို မနက်ဖြန်မနက်ဝယ်ရအောင် ဘူတာကြီးမှာဆုံဘို့ချိန်းခဲ့ကြတယ်… ပြီးတော့မှကိုမောင်မောင်တဲတဲ့မြကန်သာဟိုတယ်ကို ဒေါ်ရီရီခင်နဲ့သွားခဲ့ကြတယ်…မတွေ့ခဲ့ရလို့စာရေး ထားခဲ့ရတယ်…ည၉နာရီဖုန်းထပ်ဆက်မှတွေ့ရတယ်…ကိုမောင်မောင်က ဦးဇော်ခင်သူတည်းတဲ့နေရာကို ဘယ်လို သိလဲမသိဘူး…ရောက်လာပြီးတော့…ဟိုတယ်ရှေ့ကနေ…မန္တလေးက MI နှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ဆိုပြီး အော်နေတယ်တဲ့…ဆဲနေတယ်တဲ့…ချော့ခေါ်ပြီးအရက်နဲ့ဧည့်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့… အရက်ဖိုးကိုလည်း ခင်ဗျားက MI ဆိုတော့ ဒီဘက်မှာစာရင်းပြတောင်းပေါ့… မဟုတ်လဲဟိုဘက်ကဆိုရင်လဲ…ဟိုဘက်ကသူပုန်ဆီမှာစာရင်းပြ တောင်းဆိုပြီး ပြောသွားတယ်တဲ့… ကိုမောင်မောင်လည်းမနက်ဖြန်ည၉နာရီ ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်…မန္တလေးကို၁၂.၃.၉၂ အ ရောက်လာမယ်ဆိုတာလည်းပြောလိုက်တယ်… ( ၉.၃.၁၉၉၂ ) မနက်၎နာရီ ရထားလက်မှတ်သွားတန်းစီရတယ်…လက်မှတ်တန်းစီတာကျော်ပြီးစီလို့ တရုပ်မ၃ယောက်နဲ့ စကားများရသေးတယ်…အားလုံးအတွက် အထက်တန်းကချည်းရတယ်…..သာယာဝတီကတစ်ယောက်လည်းပါ တယ်…..ပဲခူးကမိဘတစ်ယောက်ကသူ့အစီအစဉ်နဲ့သွားပြီး မန္တလေးကျမှဆုံမယ်လို့သိရတယ်…..လက်မှတ်ဝယ် ပြီးမိဘတွေကခုမှသိရတာဆိုပေမဲ့ ဘ၀တူတွေဆိုပြီး ပိုပြီးခင်မင်မှုရကြတယ်….. ရထားလက်မှတ်ရပြီးတာနဲ့ ကျောင်းမှာမိဘဆရာအသင်း အစည်းဝေးရှိလို့ သွားရတယ်…နာယက(ရ၀တ) ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စာရင်းစစ်(မိဘ)တို့လာတယ်…..ခရီးသွားမည့်အကြောင်း…ကျောင်းကိုအပ်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်း…ပြောခဲ့ရ တယ်…လုပ်စရာရှိတာတွေ…ဆရာမအတွင်းရေးမှူးနဲ့…အဖွဲ့ဝင်ဆရာမကိုမှာခဲ့ရတယ်….. လုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းတွေကို စီစဉ်ပေးခဲ့ရတယ်….. ( ၁၀.၃.၁၉၉၂ ) သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်း ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီးတော့…..ကျောင်းကိုဆက် သွားရသေးတယ်…..ဆရာကြီးကိုဝင်တွေ့ပြီး သားကိစ္စသွားမယ့်အကြောင်းနဲ့ ခွင့်စာတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြ တယ်…..ပြောပြီးရုံးမှာဆရာမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ထိုင်နေတုံး ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ခဏလိုက်ခဲ့ပါ… ဗိုလ်မှူးနဲ့စကားပြောရအောင်…ကျောင်းကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့…ပြီးပါပြီဆိုပြီးလိုက်သွားတော့…ရုံးအပြင်မှာကား ရပ်ထားတယ်…ကားထဲမှာဝင်ပြီးစကားပြောကြတယ်….. ဗိုလ်မှူးက…လိုက်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာတွေအကူအညီလိုသလဲ…လိုအပ်တာပြောပါလို့ပြောတယ်….. ကိုယ်ကဘာမှမလိုပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်…..ဒါဆိုရင်စကားပြောတာကအစဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ပြောဘို့….. ကိုယ့်သားသမီးရရှိရေးအတွက် အတိုက်အခံပြောရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဖက်ကိုပုတ်ခတ်ပြီးမပြောဘို့ပြောတယ်… အဲဒီတော့ကိုယ်က…ဗိုလ်မှူး…ကျမဟာ…ကျမလုပ်တဲ့ဆရာမအလုပ်ကို…၀ါသနာပါလွန်းလို့လုပ်လာတာပါ… ၂၈ နှစ်တောင်ရှိပါပြီ….ကျမအလုပ်ကိုထိခိုက်မဲ့စကား….နိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်မည့်စကား…သစ္စာဖေါက်တဲ့အလုပ်ကို မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်….. အဲဒီတော့ဗိုလ်မှူးက…နောက်ပိုင်းကျောင်းကိစ္စတွေကို သူတို့ကူညီလုပ်ပေးပါ့မယ်…ဆရာကြီးကောပြောပြ ထားလားမေးတော့…အပြည့်အစုံတော့မပြောပြထားပါဘူး…အရိပ်အမြွတ်လောက်တော့ သိပါတယ်လို့ပြောလိုက် တယ်…..ကောင်းပါတယ်….အများကြီးသိတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့….ဟိုဘက်ကသိ ရင်ကလေးတွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးလို့ ပြောပြီး…အားလုံးအစဉ်ပြေမှာပါလို့ပြောတယ်…..ကျမကရုံးမှာ နေခဲ့ပြီး ဒေါ်ရီရီခင်ကိုတော့ ဓာတ်ပုံရွေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ မြို့ထဲကိုလိုက်ပို့လိုက်ကြတယ်….. အိမ်ရောက်တော့ မနက်ခရီးထွက်ဘို့လိုအပ်တာတွေဝယ်ရတယ်…..ဒေါ်ရီရီခင်ကိုလည်း အိမ်လာအိပ်ဘို့ မှာထားတာ…၈နာရီထိမလာသေးလို့…ဆိုက်ကားအသွားအပြန်ငှားပြီးလိုက်သွားတယ်…ဘေးအိမ်ကစောစောကဘဲသုဝဏ္ဏကိုသွားတယ်ပြောလို့ပြန်ခဲ့ရတယ်…..အိမ်ရောက်တော့သူရောက်နှင့်နေတယ်….မနက်သွားဘို့စိတ်စော နေတော့ တစ်ညလုံးအိပ်မပျော်တော့ဘူး….. ( ၁၁.၃.၁၉၉၂ ) မနက်၂နာရီလောက်ထဲကနိုးနေကြတယ်….မနက်၎နာရီထိုးတော့သမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူ ဘူတာကို ဆင်းကြတယ်…..ရထားပေါ်တက်တော့ အန်ကယ်ကြီးတို့လင်မယား၂ယောက်၊မမြင့်ကြည်တို့သားအမိ၂ယောက် သာယာဝတီကတစ်ယောက်….နောက်မှဦးအေးနိုင်မှန်းသိတယ်…..ရထားထွက်တော့လိုက်ပို့တဲ့သူတွေပြန်သွားကြ တယ်…..မနက်၆နာရီရထားထွက်တော့ ၀မ်းသာဝမ်းနဲပေါ့…..၀မ်းသာတာကများပါတယ်….ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သား သမီးတွေကို သွားခေါ်ရမှာဆိုတော့ ၀မ်းသာနေကြတာပေါ့…..ပဲခူးကျော်တာနဲ့ဝဲယာတောင်တန်းကြီးတွေတွေ့ရ တယ်…..ပျဉ်းမနားကျော်တော့ကိုယ်မရောက်ဘူးသေးတဲ့ဒေသမို့…အသစ်အဆန်းတွေဖြစ်နေတယ်….မလှိုင်၊၀မ်း တွင်းရောက်တော့မှောင်ပြီး ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး…..မန္တလေးရောက်တော့အန်ကယ်ကြီးတို့အဒေါ်အိမ်ကို သွားကြတယ်….ရေမီးအစုံနဲ့ဆိုတော့ တည်းရတာအစဉ်ပြေပါတယ်….. ( ၁၂.၃.၁၉၉၂ ) မနက်စောစောထပြီး တို့ဟူးပျော့နဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲသွားစားကြတယ်…အန်ကယ်ကြီးကအားလုံးအတွက် ၀ယ်ကျွေးတယ်…..အဲဒီကမှ ၈၂လမ်းကကိုမောင်မောင်အိမ်ကိုသွားကြတယ်…..ကိုမောင်မောင်တို့သားအမိကို မတွေ့ဘူး…..ထောက်လှမ်းရေးကခေါ်သွားလို့ဆိုပြီး စောင့်နေကြရတယ်…..ပဲခူးကအန်တီစန်းတို့လင်မယား လည်းရောက်နေကြတယ်…..မိတ်ဆက်ကြတယ်….မကြာဘူးကိုမောင်မောင်တို့ရောက်လာကြတယ်….. နောက်ထောက်လှမ်းရေးကဆရာကြီးတစ်ယောက်လာပြီး…..လိပ်စာနဲ့ကလေးတွေဓာတ်ပုံတစ်ပုံစီယူ သွားတယ်…..ခရီးထွက်ဘို့တစ်ယောက်၁၀၀၀ကျပ်စီပေါင်းကြတယ်…..ကိုမောင်မောင်က ခေါင်းဆောင်သွားမှာ ဆိုတော့ ပူးတဲ့ငွေသူ့ကိုအပ်ထားကြတယ်…..လားရှိုးလက်မှတ်ကို ကိုမောင်မောင်ဘဲ သွားဝယ်တယ်….. ကိုမောင်မောင်ဆီကအပြန် ဈေးချိုထဲမှာထမင်းစားပြီး ဘုရားကြီးကိုသွားကြတယ်….တည်းတဲ့အိမ်မှာမနက်က တည်းကထမင်းချက်ထားပေမဲ့ ညနေကျမှစားဖြစ်ကြတော့တယ်… တည်းတဲ့အိမ်ကိုလည်း ဘုရားဖူးလာတယ်လို့ဘဲပြောကြတယ်….. ( ၁၃.၃.၁၉၉၂ ) စောစောထ…ရေမိုးချိုးပြီးမနေ့ကဆိုင်မှာဘဲ ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားကြတယ်…..စားပြီးဈေးချိုဘက်သွား… ကိုမောင်မောင်ဆီရောက်တော့ လက်မှတ်အစဉ်ပြေတာသိရတယ်…ဒီအချိန်မှာထောက်လှမ်းရေးကဆရာကြီးနဲ့ အဖွားကြီးတစ်ယောက်ပါလာတာတွေ့ရတယ်….မိဘတွေလိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ သူလဲလိုက်ချင်တဲ့အကြောင်း ဇွတ်ပြောနေလို့ ခေါ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြောတယ်…..ကိုမောင်မောင်နဲ့အားလုံးကလည်း သက်ဆိုင်ရာမိဘတွေသာ ခေါ်ခိုင်းတာမို့ လူပိုမခေါ်ခဲ့ဘို့မှာထားတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြပြီး စာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပေးပေးပါ့မယ်လို့ပြော လိုက်ကြတယ်….. ( ၁၄.၃.၁၉၉၂ ) အန်ကယ်ကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံက သူတို့အဖိုးအဖွားလက်ထက်က လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ကျောင်း တိုက်ကိုလိုက်ပို့တယ်…အန်ကယ်ကြီးတို့ကလှိုင်းတက်မင်းသမီးအဆက်တွေလို့သိရတယ်….အဖိုးအဖွားမိဘ တွေကအစ မင်းမှုထမ်းတွေဆိုတာသိရတယ်…ရှမ်းစော်ဘွားအဆက်တွေဆိုတာလဲသိရတယ်…မာနမကြီးဘဲ သဘောကောင်းလို့ဝမ်းသာရတယ်….သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတာဘဲလို့အောက်မေ့ရတယ်….. အန်ကယ်ကြီးတို့ကကျန်ခဲ့ပြီး အိမ်တော်ရာဘုရားကိုဆက်သွားကြတယ်…ဈေးချိုမှာပစ္စည်းတစ်ချို့ဝယ်တယ်… ကျောင်းသားထောက်လှမ်းရေးကမှာတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်မြရင်ဝက်အူချောင်းတစ်ပိဿလည်း ၀ယ်ခဲ့ကြရတာ မှတ်မိတယ်…ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးပြီး အ၀တ်၃စုံဘဲထည့်ထားပြီး မလိုတာတွေကို မန္တလေးမှာဘဲထားခဲ့ကြ တယ် ….အိမ်ရှင်တွေကိုဘုရားဖူးဆက်ထွက်မယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ရတယ်….. ( ၁၅.၃.၁၉၉၂ ) နံက်၎နာရီအဝေးပြေးဂိတ်ကိုသွားကြတယ်…..အဲဒီမှာကိုမောင်မောင်နဲ့ပဲခူးကအန်တီစန်းတို့နဲ့တွေ့တယ်. အဲဒီမှာကျောင်းသားအဖွဲ့ကမှာလိုက်တဲ့ လမုန့် ထိုးမုန့်တို့ကို ကိုမောင်မောင်က၀ယ်လာတယ်… ၀က်အူချောင်းကိုတော့ ဦးအေးနိုင်က၀ယ်လာတယ်…ကားရောက်တာနဲ့ကားပေါ်တက်ကြတယ်…. နံက်၅း၃၀မှာကားစထွက်တယ်…..အန်ကယ်ကြီးကကျောက်မဲအထိလိုက်လာတယ်…ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်အမေ ကအစမှာဟိုအထိလိုက်ဘို့ဘဲ…လူပိုမလိုက်ရဘူးဆိုလို့ မန္တလေးမှာကျန်ခဲ့တယ်…၁၆.၃.၉၂မှာအန်ကယ်ကြီး နဲ့အတူပြန်ဘို့စီစဉ်ထားတယ်…ကျန်ခဲ့တဲ့အန်တီစန်းအမျိုးသားနဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်အမေ ဒေါ်တင်တင်တို့က လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်….. မန္တလေးကစထွက်တော့ သားတွေနဲ့တွေ့ဘို့နီးပြီဆိုပြီးဝမ်းသာကြတာပေါ့…ကျောက်မဲမြို့နယ်ထဲရောက် တော့ ၁၁း၀၀နာရီလောက်ရှိပြီ….အန်ကယ်ကြီးကကျောက်မဲမှာဆင်းနေခဲ့တယ်…သူလည်းအန်တီကြီးအတွက် စိတ်မချလို့ အတန်တန်မှာတယ်…ကိုယ်တို့ကလည်းမိဘလိုသဘောထားပြီး ကောင်းအတူ ဆိုးအတူ ကူညီပြီး သွားပါ့မယ်လို့ မှာခဲ့ကြတယ်…လားရှိုးကို၎း၃၀လောက်ရောက်တယ်….ဂိတ်နဲ့နီးတဲ့တည်းခိုခန်းမှာဘဲတည်းကြ တယ်…ပိုင်ရှင်ကဆရာမတစ်ယောက်ပဲ…သဘောလည်းကောင်းတယ်…ကိုယ်တို့ကတော့ပစ္စည်းစုံအောင်စစ်ပြီး နားကြတယ်…ကိုမောင်မောင်ကမနားရဘူး….လားရှိုးထောက်လှမ်းရေး၉ကိုသတင်းပို့ရသေးတယ်… တာဝန်မှူးနဲ့ဘဲတွေ့ပြီးမှာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်…မနက်ခရီးဆက်ထွက်ဘို့ လက်မှတ်ကြိုဝယ်ရတယ်. ( ၁၆.၃.၁၉၉၂ ) မနက်၅း၀၀နာရီထိုးတော့ ကားဂိတ်သွားပြီး မူဆယ် လားရှိုး နမ့်ခမ်း ကားပေါ်တက်ကြတယ်…၅း၃၀မှာကား စထွက်ပြီး လားရှိုးအထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ အစစ်ဆေးခံဘို့ ကားတွေတန်းစီစောင့်ကြရတယ်…စစ်ဆေးရေးအ ဖွဲ့တွေက၇း၃၀မှလာကြမှာကိုး….၇း၃၀လည်းပြီးရောစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေရောက်လာကြတယ်… ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေက တစ်ကားပြီးတစ်ကားတက်ရှာလိုက် စီးတဲ့လူမှတ်ပုံတင်စစ်လိုက်နဲ့ ကိယ်တို့(၆) ယောက်အစဉ်ပြေပြေဘဲ ကားပေါ်ပြန်တက်ရတယ်….ကိုမောင်မောင်အလှည့်ကျတောဲ့ပြဿနာတက်တော့တာဘဲ.. မွတ်ဆလင်ကုလားတွေကို တရုပ်ပြည်နယ်စပ်ဘက်မသွားဘို့ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်တဲ့….. ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူး…မူဆလင်ဆိုပေမယ့်နိုင်ငံသားကဒ်ကိုင်ထားတာပါ…..ကိုယ်တို့ကကားပေါ်က စောင့်နေတယ်…တစ်နာရီလောက်ကြာလာတော့ကားပေါ်ကသူတွေ ပွက်လောရိုက်ကုန်ရော…အချိန်မှီ ရောက်ချင်တယ်….သူ့ကိုထားခဲ့ပြီးကားထွက်ပါလို့ ပြောကြတယ်…ဒရိုင်ဘာကသဘောကောင်းပြီးစောင့်ပေး တယ်….ကိုမောင်မောင်ကထောက်လှမ်းရေး၉ကိုဖုန်းဆက်မေးတယ်…..ဗိုလ်ကြီးကမရှိတော့အားလုံး ကားပေါ်က ဆင်းနေခဲ့ကြရတယ်….ကားကဆက်ထွက်သွားတယ်…အစဉ်မပြေဖြစ်တော့ ၂၀ရက်နေ့အမှီဟိုကိုမရောက်မှာ အရမ်းစိတ်ပူနေကြတယ်… ကားငှားပြီးမနေ့ကတည်းခိုခန်းကိုပြန်လာကြတယ်…ကိုမောင်မောင်လည်းမန္တလေးထောက်လှမ်းရေးကို ဖုန်းဆက်၊ထောက်လှမ်းရေး၉ကိုဖုန်းဆက်နဲ့အလုပ်များသွားတယ်…တည်းခိုခန်းမှာ နေတုံး ၁း၀၀နာရီမှာ ထလရ၉ ကဗိုလ်ကြီးက အားလုံးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ သွားရတယ်…..ဗိုလ်ကြီးသုတဆွေကိုတွေ့တယ်…တပ်မှူးကိုလည်း တင်ပြထားကြောင်း သွားမည့်သူအမည်နဲ့ သားတွေရဲ့အမည်ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်…မြို့နယ်မှူး(လ၀က)ကို လည်းဖုန်းဆက်တယ်…မနက်ဖြန်(၇)ဦးကိုလွှတ်လိုက်ဘို့ပြောလိုက်တယ်….. ဒါနဲ့တည်းခိုခန်းပြန်ကြတယ်…ကိုမောင်မောင်ကလက်မှတ်ပြန်ဝယ်ရတယ်….မနက်တုံးကလည်း ဂိတ်မှာ ကိုယ်တို့(၇)ယောက်ကိုလူတွေက ဘယ်လိုထင်မလဲ…ဒီကုလားကမိန်းမ(၅)ယောက်ကိုနယ်စပ်ခေါ်သွားပြီး ဘာ လုပ်မှာလဲ….မိန်းမ(၅)ယောက်ကလည်းအဖွားကြီးတွေဆိုတော့ဘာလုပ်တာပါလိမ့်ဆိုပြီး….ပြောကြမှာလို့ ဟာသ ပြောပြီးရီကြသေးတယ်….၀က်အူချောင်းတွေယူလာလို့အထစ်အငေါ့ဖြစ်တာလားလို့ တွေးမိကြသေးတယ်… အန်တီကြီးကညဘက်ခေါပုတ်ကင်စားချင်တယ်ဆိုလို့ သွားစားကြတာ အန်တီကြီးပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက် သွားတယ်…၂၀၀၀ကျပ်လောက်ပါသွားတယ်….ည၁၂နာရီလောက်တံခါးကိုတ၀ုန်းဝုန်းထုသံကြားလို့ဖွင့်ပေးတော့ ဧည့်စာရင်းစစ်တာတဲ့….သားတွေရေးလိုက်တဲ့စာတွေကလည်းပါလာတာဆိုတော့ လန့်နေကြတာပေါ့…. နောက်မှသိရတာက တည်းခိုခန်းနဲ့မနီးမဝေးမှာ ယောက်ကျားတစ်ယောက်ကိုမိန်းမ(၄)ယောက်က သတ်သွားလို့ဆိုဘဲ….တော်သေးတာပေါ့…ကိုယ်တို့က(၅)ယောက်မို့ဆိုပြီးစိတ်အေးရတယ်….. ( ၁၇.၃.၁၉၉၂ ) ဒီနေ့တော့အားလုံးအစဉ်ပြေစွာနဲ့ ဆက်ထွက်ဖြစ်ကြတယ်…..သိန္နီလွန်ပြီး ကွတ်ခိုင်ရောက်တော့ ထမင်း စားကြတယ်…ကွတ်ခိုင်ကျော်တော့နမ့်ဖတ်ကာထဲရောက်တယ်…ဒီလိုနဲ့မူဆယ်ထဲဝင်လာတော့ လမ်းတွေအရမ်း ဆိုးတယ်…ကားခုန်ရင်ခေါင်းနဲ့အမိုးနဲ့တက်ဆောင့်တဲ့အထိဖြစ်တယ်…၅း၀၀နာရီလောက်မူဆယ်ကိုရောက်တယ်.. လှိုင်းတက်တည်းခိုခန်းမှာဘဲတည်းကြတယ်….အမျိုးသမီး(၅)ယောက်ကအခန်း(၁၃)မှာရတယ်…အန်တီ ကြီးက၁၃ဂဏန်းမကြိုက်လို့( A )လို့ပြောင်းရေးပေးကြတယ်…ကိုမောင်မောင်ကထလရ(၂၃)/ဆွယ်ကို သတင်း ပို့ရတယ်….ဗိုလ်ကြီးမင်းလွင်နဲ့တွေ့တယ်…လားရှိုးကလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ပြောတော့ မနက်စောစောဒီဘက်ဂိတ်မဖွင့် ခင်ထွက်သွားပါလို့ပြောတယ်တဲ့…… မူဆယ်ညဈေးတန်းသွားပြီး ထမင်း၅ကျပ်ဟင်း၅ကျပ်နဲ့စားကြတယ်…..မနက်ဖြန်တရုပ်ပြည်ဘက်ကူးမဲ့အ ကြောင်းအိမ်တွေကိုစာရေးကြတယ်…စာတွေမရောက်ဖူးဆိုတာနောက်မှသိရတယ်….. ( ၁၈.၃.၁၉၉၂ ) ၄း၀၀နာရီထိုးတော့ တည်းခိုခန်းကထွက်ပြီး ညဈေးဘက်သွားကြတယ်…..အဝေးပြေးဂိတ်မှာကားတစ်စင်း ငှားပြီးနယ်စပ်ဂိတ်ဘက်သွားကြတယ်…..မြန်မာဂိတ်ကမဖွင့်သေးတော့ တရုပ်ပြည်ဘက်ကိုလမ်းကြိုလမ်းကြားက ဖြတ်ပြီးနာရီဝက်လောက်သွားရတယ်… တရုပ်ပြည်ကြယ်ခေါင်ဂိတ်ကိုရောက်သွားတယ်… မူဆယ်နဲ့ကြယ်ခေါင်က မြေတစ်ဆက်တည်းဘာမှမခြားဘူး….နယ်ခြားကျောက်တိုင်လေးဘဲခြားထားတယ်…တရုပ်ပြည်ထဲရောက်တော့ ဂိတ်မဖွင့်သေးလို့စောင့်နေရသေးတယ်…စောင့်ရင်းနဲ့အိမ်သာသွားကြတော့ အိမ်သာကဗမာအိမ်သာတွေနဲ့လုံးဝ မတူဘူး…..တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘေးအကာနိမ့်နိမ့်လေးတွေဘဲကာထားတယ်…ရှေ့တည့်တည့်မှာအကာလုံးဝမထားဘူး ညစ်ပတ်တာလည်းအလွန်ဘဲ…ရေလုံးဝမသုံးဘူး…..နောက်တစ်ကြိမ်မသွားချင်တော့ဘူး…..၆း၀၀နာရီထိုးတော့ ဂိတ်ဖွင့်တယ်…နေ့ကူးလက်မှတ်တစ်လှည့်စီသွားလုပ်ကြတယ်…..ပြီးတော့တရုပ်ကားနဲ့ရွှေလီကို ဆက်ထွက် ခဲ့တယ်…. နာရီဝက်လောက်နေတော့ ရွှေလီမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့တံတားကိုဖြတ်ရတယ်…..နောက်တော့ ရွှေလီမြို့ထဲကိုရောက်လာကြတယ်…ယိုးဒယားတန်းကိုဖြတ်ပြီး ချစ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားကြတယ်…ချစ်လ္ဘက်ရည် ဆိုင်က ABSDF ကဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ့…အဲဒီမှာစခန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမည့်သူနဲ့သွားတွေ့ရတယ်…ရောက်ရောက် ချင်းမတွေ့ရသေးဘူး…CS သံချောင်းရဲ့ရဲဘော်လေး မိုးကြိုးဆိုတာနဲ့တွေ့တယ်…အသက်၂၀တောင်ရှိပုံမရဘူး… မိုးညှင်းဘက်ကလို့ပြောတယ်…လ္ဘက်ရည်ဖျော်တဲ့မောင်ညွန့်ဆိုတာတွေ့တယ်….နံပြားတို့ပလာတာတို့လုပ်တဲ့ ကိုကျော်စိန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်….ဒီဆိုင်မှာဘဲအစားအသောက်မှာစားကြတယ်….. မကြာခင်မှာဘဲ အရပ်ရှည်ရှည် ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေးနဲ့ ကုလားတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်… ကိုမောင်မောင်နဲ့ပြောကြပြီး နောက်မိတ်ဆက်ပေးတယ်….သားသမီးတွေနေကောင်းကြရဲ့လားလို့မေးကြတယ်.. အားလုံးကောင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်… နောင်တောင်းမှာPASSPORT လုပ်ကြဘို့ကိုမောင်မောင်ကစီစဉ်တယ်…တရုပ်ငွေလဲဘို့လုပ်ကြရတယ်… ကိုယ်တို့ကတော့ဆိုင်မှာဘဲကျန်နေခဲ့ကြတယ်….. မကြာခင်မှာရှေ့နားက စားပွဲကနေ ကျောင်းသား၃ယောက် ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့လုပ်နေတယ်….. ကျော်မြင့်နဲ့လည်းတိုးတိုးပြောနေကြတယ်…အဲဒီမှာအောင်နိုင်ကိုတွေ့တယ်…ကျန်တဲ့သူတွေကိုမသိဘူး… အောင်နိုင်ကိုသိတာက သားကဘောင်ဒရီလမ်း သူတို့ပါတီမှာနေတုံးက ကိုယ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မန္တလေး(ဆေး) က အောင်နိုင်လို့ ပြောပြထားလို့သိတာပါ…ဒါပေမယ့်သူက မမှတ်မိတာလား မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတာလားမသိ ဘူး…ကိုယ်ကလည်းသိပေမယ့် မသိဟန်ဆောင်နေပါတယ်…..သူ့ကိုဥက္ကဋ္ဌဆိုတာလည်းသိပါတယ်…ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့ မြက်ခင်းသစ်ထဲမှာသူတို့အကြောင်းပါထားတာကိုး…..သွားခါနီး သမီးအကြီးက အောင်နိုင်အဲဒီမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေတာလို့ပြောလိုက်သေးတယ်….. ဒါပေမယ့်သူတို့အဖွဲ့က ကိုယ်တို့အဖွဲ့ကို ဘာမှနှုတ်ဆက်တာမရှိဘူး…..စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်လူပါး ၀တယ်လို့…သူတို့ကိုယ်သူတို့ဥက္ကဋ္ဌတွေဆိုပြီး မိဘတွေကိုမခန့်လေးစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ….. ကိုမောင်မောင်တို့ပြန်လာတော့ မနက်ဖြန်သွားဘို့တိုင်ပင်ကြတယ်…..ကားခကတရုပ်ငွေ၅၀၀ကျပ်ကျတယ်တဲ့… ကိုယ်တို့အဖွဲ့က၃၀၀ခံရမယ်….သူတို့က၂၀၀ကျခံမယ်တဲ့…..ငွေ၃၀၀နဲ့အခြေအတင်ပြေ�¿ UnlikeLike · · Unfollow PostFollow Post · Share * * You and Moe Aye like this. *2shares2 shares * * o Khine Khine Saw Lwin ကျမရဲ့ မေမေ နှစ်ပေါင်း( ၂၀) ကျော်တိုင် သိမ်းထားခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကလေး၊ သူ့ရင်ထဲက အကြောင်းတွေ ရိုးသားစွာ ရေးထားတာပါ။ about an hour ago · LikeUnlike * Writeacomment...
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 4:48 AM No comments:
(၁) စွယ်တော်ရွက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝတ္ထုတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေမှာ ဖတ်ရ၊ ကြည့်ရသည်။ အဲဒီနောက် တော်တော်လေးကြာမှ အပြင်မှာ စွယ်တော်ပင်ကို မြင်ဖူးလေသည်။ ဒါကလည်း တမင်သက်သက် ရှာပြီး လိုက်ကြည့်၍ မြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှ ပြင်ပ လောကသို့ တစ်ယောက်ထဲ သွားဖူးသည်။ သွားဖူးသည်ဆိုတာထက် ကျမ မေမေက တစ်ယောက်ထဲ လွှတ်ပေးပြီး သွားစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါတောင် တက္ကသိုလ် စတက်သည့်နေ့က ကျမတို့ အိမ်နှင့် တစ်လမ်းကျော်က မေမေ့သူငယ်ချင်း၏ သမီးဖြစ်သူက ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတစ်စုကို ကိုယ်တက်ရမည့် အခန်းဝအထိ လိုက်ပို့ပေးသေးသည်။ လိုက်ပို့ပေးသည့် အမက ကျမတို့တက်ရမည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်( ဗိုလ်တစ်ထောင်နယ်မြေ) တွင် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ် နှစ်နှစ်တက်ခဲ့ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူပင်။ ဒီအကြောင်းကို ကျမ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အကြောင်းတစ်ခု တိုက်ဆိုင်၍ ပြောပြမိရာ ကျမအား ရယ်၍ မဆုံးပေ။ ကျမသည် စာထဲတွင် ဖတ်ဖူးသည်များ ၊ ရုပ်ရှင်များတွင် ကြည့်ဖူးသည်များကို အပြင်ရောက်သည်နှင့် ရှာကြည့်တတ်သည်မှာ အကျင့်ဖြစ်နေလေသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ) သို့ရောက်သည်နှင့် ကျမ ပထမဆုံး သွားကြည့်သည်က ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံမြေနေရာ၊ နောက်ပြီး ဗိုလ်အောင်ကျော် အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်လေး။ ကျမနှင့် အဖော်လိုက်ပေးသည့် သူငယ်ချင်းများက ပွစိပွစိ ၊ ဖြတ်သန်းနေရသည့် စနစ်ကြောင့် သူတို့သည် ဒါတွေကို မေ့နေပြီ၊ မဆိုင်သလိုဖြစ်နေသည်။ ကျမသည်သာ ဖေဖေ့ ကျေးဇူးကြောင့် စိတ်ဝင်စားနေခြင်း၊ မမေ့နိုင်ခြင်းပင်။ ( ၁၉၈၄ ခုနှစ်ကအခြေအနေပါ။)၊ နောက်တော့ အဓိပတိလမ်းကို အစအဆုံး တမင် လျှောက်ကြည့်သည်။ ထိုသို့ တမင်သက်သက် လျှောက်ကြည့်၍သာ အဓိပတိလမ်းကို လျှောက်ဖူးလေသည်။ မလျှောက်ခဲ့လျှင် ယခုအချိန်ထိ အဓိပတိလမ်းကို မြင်တောင်မြင်ဖူးပါ့မလား မသိ။ အိမ်မှ လိုင်းကားစီးလာရင် မာလာဆောင်မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းရသည်၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ဝင်ပေါက်မှ ဝင်ပြီး A5 စာသင်ဆောင်သို့ ဝင်လေလျှင် အဓီပတိလမ်းကို ယောင်လို့ပင် မမြင်ရ မဖြတ်ရ။ ထိုစဉ်က ကျမတို့ ရူပဗေဒ(ဂုဏ်ထူးတန်း) ကို ဝိဇ္ဖာခန်းမ အနီးက ဝိဇ္ဖာစာသင်ခန်း များတွင် သင်ကြားစေခြင်းဖြစ်သည်။ သစ်ပုတ်ပင်လည်း ထို့အတူပင် တမင်သွားကြည့်မှ မြင်ရသည်။ ဒီတိုင်းဆို ဘယ်လိုမှ ထိုဘက်အခြမ်းသို့ မရောက်ပေ။ ထို့နောက် တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုက်၊ ပဲခူးဆောင်၊ အင်းဝဆောင်၊ မန္တလေးဆောင် စသဖြင့်။ ကျမအတွက်တော့ အရာရာကို တမင်ပင် လိုက်၍ ကြည့်ရလေသည်။ ထိုမှ စာရေးဆရာတို့စိတ်ကူး ဖြင့် အများဆုံး ရေးဖွဲ့လေ့ရှိသည့် ကံ့ကော်( ကံ့ကော်ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မြင်ဖူး တွေ့ဖူးပြီးသား ဆိုတော့ မဆန်း) စွယ်တော်၊ စွယ်တော်ရွက်ကို မြင်တော့ " အော်.... ဒါ့ကြောင့် စာရေးဆရာတွေ စိတ်ကူးယဉ် ရေးကြတာကိုး၊ စိတ်ကူးယဉ်စရာပင်၊" ဟုသိလာရသည်။ အစိမ်းရောင်သစ်ရွက်ကလေးသည် အသဲနှလုံးပုံ နှစ်ခု တွဲရက်ကလေး၊ စွယ်တော်ရွက်ကလေးကို မြင်ဖူးသည်နှင့် ကျမသဘောကျမိသည်။ ကျမသူငယ်ချင်းများက စွယ်တော်ရွက်ကို ခုမှမြင်ဖူး၍ အံ့သြနေသည့် ကျမကို တအံ့တသြ ဖြစ်ကြသည်။
(၂) ထုံစံအတိုင်း လူငယ်သဘာဝ ချစ်သူရလာပြန်တော့ စွယ်တော်ရွက်က တခန်းတစ်ကဏ္ဍ ပါဝင်လာသည်။ ဒါကမဆန်းပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ယခု ကျမခင်ပွန်း ဖြစ်လာမည့် ကိုလေးက စွယ်တော်ရွက် တစ်ခြမ်းတွင် ကိုလေး၊ နောက်တစ်ခြမ်းတွင် ခိုင် ဟုရေးပြီး ကျမကို ပေးသည်။ စာအုပ်ကြားထဲညှပ်ထားလိုက်သည်။ ကိုလေးနှင့် ကျမ အိမ်ထောင်ကျပြီး အတော်လေးကြာပြီး၊ တနေ့ အိမ်ရှင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းများ ရှင်းရင်း ကိုလေးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ ကြားက ထိုစွယ်တော်ရွက်ကလေး ထွက်ကျလာသည်။ စွယ်တော်ရွက်ကလေးက ခြောက်နေသော်လည်း နာမည်များကဒီအတိုင်း တွေ့နေရသည်။ ကိုလေးက ကြွေသွားမှာ စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ရွရွလေးလှမ်းယူသည်။ တဆက်တည်း သတိတရ မေးလေသည်။" ကျမကို ပေးထားသည့် စွယ်တော်ရွက် ဘယ်မှာလဲတဲ့။ " ကျမဖြင့် မေ့နေတာကြာပြီ။ ဘယ်စာအုပ်ကြားထဲ ညှပ်လိုက်မိမှန်း မသိ။ ကြာလဲကြာပြီ ဆိုတော့ ကျောင်းစာအုပ်တွေလည်း မရှိတော့။ " ဒန်ဝယ်တယ်၊ ကြေးဝယ်တယ် ကုလားဆီ ရောက်သွားပြီ ထင်တယ်ဟု" ဟု ဖြေလိုက်ရာ စိတ်ဆိုးလေသည်။ ထိုတစ်ရက်လုံး ကျမကို စကားကောင်းကောင်း မပြောတော့ပေ။ ကိုလေးသည် နည်းနည်း စိတ်ကူးယဉ်သည်။ သူကတော့ စိတ်ကူးယဉ်တာမဟုတ်ပါတဲ့၊ အလေးအနက်ထားတာပါ ဆိုလေသည်။ အိမ်ထောင်သက် ဆယ်နှစ်လောက် ရောက်အပြီးမှာတောင် ဘယ်လိုက ဘယ်လို စိတ်ကူးပေါက်သည် မသိ။ မြို့ပတ်ရထားစီးပြီး ပြန်အလာ လက်မှတ်မှာ နေ့စွဲရေးပီး ကျမကို သိမ်းထားဟုဆိုလေသည်။ ဘာလုပ်မှာလဲ၊ ရှုပ်ကရှုပ်နဲ့ ဟု ကျမကပြန်ပြောရာ သူ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အဖေနဲ့အမေ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ရတု လုပ်တော့ သူတို့ သွားထား လာထားတဲ့ လက်မှတ်ကလေးတွေ၊ ဘောက်ချာစာရွက် ကလေးတွေကို ဘုတ်ကလေးမှာ ကပ်ထားပြီး လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ပြထားတာ သဘောကျလို့ ပါတဲ့။ နောက်တော့လည်း လွှတ်ပစ်လိုက်သည်ထင့်။ ဘယ်တွေရောက်မှန်း ပင်မသိ။ ကျမက လွှင့်ပစ်သန်သည် ကိုသူသိသည်။ အိမ်ရှုပ်လျှင် ကျမ မနေတတ်။ ဒါ့ကြောင့် တော်ရုံဆို ဘာမှမထား အကုန်ပစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်း သေးသေးမွှားမွှား ဆိုပိုဆိုးသည်၊ လုံးခြေပြီး အကုန်ပစ်သည်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးများ ကျောင်းအပ်ထားသည့် ဖြတ်ပိုင်းများ၊ ကျောင်းတက်ပီးသည်နှင့် လွှတ်ပစ်သည်။ တစ်နှစ်မှာတော့ ကျမတို့ ဋ္ဌာနက ကျောင်းသားရှိသည့် ဝန်ထမ်းမိဘများကို ထောက်ပံ့ကြေး ပေးမည်၊ ကျောင်းအပ်ထားသည့် ဖြတ်ပိုင်းများ ယူလာခဲ့ပါ ဆိုတော့ ကျမ မနည်းပြောယူရသည်။ နောက်ဆုံး မရလည်း နေပစေ ဟုပင် သဘောထားလိုက်သည်။ နောက်တော့ အမှန်တကယ်လည်း အပ်ထားသည် ဖြစ်ရာ ထုတ်ပေးပါသည်။ ဒါကိုတောင် စွယ်တော်ရွက် လွှင့်ပစ်သလောက် စိတ်မဆိုးပေ။
၂၀၀၅ ခုနှစ် တုန်းကဖြစ်သည်။ ကိုလေးကို ဌာနမှ သင်တန်းတစ်ခု တက်ရန် စေလွှတ်သည်။ ထိုသင်တန်းသို့တက်ရန် အကြိမ်ကြိမ်ငြင်း ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်က အိမ်မှာ ကလေး (၃) ယောက် နှင့် ကျမ ကိုယ်ခွဲလည်းမရှိ၍ ဘယ်လိုမှ သူတက်လို့ မဖြစ်ဟု အကြောင်းပြထားသည်။ သူသင်တန်း သွားတက်လျှင် ကျမ အလုပ်မှ ခွင့်ယူရမည်။ သင်တန်းက ဖောင်ကြီးတွင်ရှိသည်။ လှည်းကူးမြို့နယ် အတွင်းမှာရှိသည်။ စုစုပေါင်း သင်တန်းကာလ (၃) လ တွင် ပထမ တစ်လ မှာ၊အပြင် လုံးဝ မထွက်ရ။ တစ်လပြည့် ပြီးနောက် ကျန်နှစ်လတွင် တစ်ပတ်နှစ်ရက်( စနေ- တနင်္ဂနွေ) အိမ်ပြန်ခွင့်ရသည်။ သို့ဖြင့် ငြင်းရင်း ငြင်းရင်း တခြားသူများ ကုန်ရာ သူ့အလှည့် ရောက်လာခြင်းပင်။ အစားထိုးရန် လူလည်းမရှိတော့။ ရာထူးတိုးပေးရန် အကြောင်းကလည်းရှိနေသည်။ ဖောင်ကြီးသင်တန်း မတက်လျှင် ဘယ်လောက်လုပ်သက်ရှိရှိ ဘယ်လောက်တော်တော် ရာထူးတိုးမပေးပေ။ အကြောင်းတွေဆုံလာသဖြင့် တက်ကိုတက်ရတော့သည်။ တစ်လပြည့်၍ အိမ်ပြန်ခွင့်ရသည့် အခါမှာတော့ စာအုပ်ကြားတွင် စွယ်တော်ရွက်ခြောက် လေးတွေပါလာသည်။ စုစုပေါင်း (၄) ရွက်။ အသဲနှစ်လုံး နှစ်ခုစီ ပူးယှက်နေသည့် စွယ်တော်ရွက် ပေါ်မှာ စာလေးတွေ ရေးထိုးထားသည်။
၁။ အဖေကြီး--- အမေကြီး။
ကလေးများနှင့်အတူ ကျမပါ ရယ်မောကြရသည်။ ထိုအချိန် ကိုလေး အသက်ပင် (၄၀) ပြည့်လု ပြည့်ခင်။ သမီကြီးကပင် အဖေကြီးက စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာ ဟုဆိုလေသည်။ အငယ်နှစ်ယောက် ကတော့ သမီးတို့ စာအုပ်ကြားထဲ သိမ်းထားမယ် ဆိုကာ သူတို့ နာမည် ပါတာ သူတို့ ယူကြလေသည်။
၃ ။မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ကျမ ဖတ်လိုက်ရသည့် ၀တ္ထုတိုလေး အကြောင်း ကိုလေးကို ပြောပြမိလေသည်။ ထိုဝတ္ထု တွင် စာအလွန်ဖတ်သော၊ စာပေတွင် မွေ့လျော်သော ၊ စာပေမြတ်နိုးသော ချစ်သူနှစ်ယောက် အလွန်ချစ်ကြသည်။ ချစ်သူဘ၀ စွယ်တော်ရွက် ကလေးတွင် နာမည်ထိုး၍ သိမ်းထားကြသည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စိတ်တူ ကိုယ်တူ ၀ါသနာတူ၍ ဘွဲ့ရ အလုပ်ရပြီးနောက် မကြာမီ လက်ထပ် လိုက်ကြသည်။ လက်ထပ်ပြီး နေထိုင်ရန် အိမ်ငှားရာတွင် အိမ်ကို သိပ်သဘောမကျလှသော်လည်း အိမ်ရှေ့မှာ စွယ်တော်ပင်လေးရှိနေတာ တွေ့ပြီး နှစ်ဦး သဘောတူ ငှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဘ၀ကို ရုန်းကန်ရင်း နေခဲ့ကြသည်။ သူတို့ တစ်လအသုံးစားရိတ်မှာ စာအုပ်တန်ဘိုးတွေက သိသိသာသာ ကုန်ကျလာသည်။ စာမဖတ်ပဲ မနေနိုင်။ မစားပဲ နေနိုင်သည် ကြွေးကြော်ကာ လင်မယားနှစ်ယောက် စိတ်တူကိုယ်တူ ရှိခဲ့သည်။ လကုန်ရက် တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့လက်ထဲ ပိုက်ဆံပြတ်လေသည်။ ထမင်းကို ဘာနှင့်စားမည်နည်း။ နောက်ဆုံးတွင် ဇနီးသည်က စိတ်ကူးရပြီး ဟင်းတစ်ခွက် ရအောင်၊ စီမံလေသည်။ လင်မယားနှစ်ယောက် ခေါင်းမဖော်တမ်း မြိန်ရေယှက်ရေ စားလိုက်ကြသည်တဲ့။ စွယ်တော်ရွက်နုနုလေးများကို ရေနွေးဖျောပြီး သုပ်ထားသည့် စွယ်တော်ရွက်သုပ် ကိုစားပြီး သူတို့ စိတ်ကူးမယဉ်နိုင်တော့ပြီတဲ့။
ကိုလေးက" စွယ်တော်ရွက်က စားလို့ရလို့လား၊ အဲဒါ စာရေးဆရာက စိတ်ကူးပြီး ရေးတာ နေမှာပေါ့ "တဲ့ ပြောလေသည်။ ကျမလည်း သေချာတော့မသိ။ စားလို့ရလို့ ရေးတာနေမှာပေါ့ လို့ပဲ ပြန်ပြောလိုက်မိသည်။
စွယ်တော်ရွက်က စားလို့ရလားသလား မရဘူးလားဆိုတာ ကြာတော့မေ့လို့ပင်နေမိသည်။
ယခု တလော ကိုလေးသည် ထမင်းစားတိုင်း ဟင်းချို တစ်ခုခု မပါလျှင်။ ဟင်းချိုသောက်ချင်တယ်၊ ချက်ပေးပါဟု မကြာမကြာ ပြောလေသည်။ သူက အရွက်တွေကို သိပ်မသိ။ ကျမကို မေးပြီး ကျမသိသည့် အရွက်မှ သူဝယ်သည်။ နောက်တစ်ခုက သူ့မှာ သွေးတိုးရှိကတည်းက တခုခုစားခါနီးလျှင် ဒါ သွေးတိုးတတ်လား မေးပြီးမှစားသည်။ ဆူးပုပ်၊ နံနံ စသည်ဖြင့် လောက်တော့ တက်မှန်း သူသိသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် မဟုတ်သည့် နေရာတွင် ရောက်နေသည်ဖြစ်ရာ အရွက်တော်တော်များများကို မသိ။ ဘာလုပ်စားရမှန်းလည်းမသိ။ ဈေးထဲမှာ ဟင်းချိုချက်ရန် အရွက်ရှာရင်း ကိုယ်နှင့်ရင်းနှီးသည့် အရွက် မတွေ့ပေ။ တခါတလေ မကျီးရွက်နုနု လေးတွေပင် ရတတ်ပေမယ့် ထိုနေ့က ကိုယ်သိသည့် အရွက် မတွေ့ရ။ခါတိုင်း မကျီးရွက်တွေ့လျှင် အပြေးအလွှား ၀ယ်နေကျ။ တစ်နေရာမှာ အရွက်တွေ ပုံ့ထားတာတွေ့ရလေသည်။ ၀ယ်သူတစ်ချို့ကိုလည်းတွေ့နေရသည်။ ၀ယ်သည်မှ တစ်ယောက်တယောက် အများကြီးဝယ်ကြသည်။ ကျမတို့ အပြေးအလျွှား ကြည့်လိုက်တော့ စွယ်တော်ရွက်နုနုလေးများ ဖြစ်နေသည်။ "ဟင်းချိုချက်လို့ ရလား" မေးကြည့်ရာ" ရတယ်၊ သူတို့လဲ ဟင်းချိုချက်မှာ" ဟု ဆိုလေသည်။ ကျမလည်း ဘယ့်နဲ့လည်း ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ မေးဆတ်ပြီး မေးလိုက်ရာ ကိုလေးက" သူတို့စားတယ်ဆို စားရလို့ပေါ့ ၀ယ်လေ"
ဟု ပြောတော့သည်။စွယ်တော်ရွက် ဟင်းချိုပူပူကို မှုတ်သောက်ရင်း ချိုလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တဲ့ စွယ်တော်ရွက် လို့ ပြောလည်းပြော၊ သောက်လည်းသောက် နေသည့် ကိုလေးကို ကြည့်ရင်း ကျမစိတ်ထဲ ရယ်ချင်နေမိသည်။ ထိုအချိန်မှာ သမီးကြီးက ထမင်းစားခန်းထဲ ၀င်လာပြီး "ဟင်..အဖေကြီး... ဟင်းချိုက စွယ်တော်ရွက်တွေပါလား" အလန့်တကြားထအော်သည်။ "စားလို့ ရလို့လား၊ စွယ်တော်ရွက်က စားလို့ရလား"
ဟင်းချိုက ပူလွန်းလို့ တဖူးဖူး မှုတ်သောက်နေရတာနဲ့ မအားလို့လားတော့ မသိ ။ သမီးကြီးရဲ့ မေးခွန်းကို မဖြေပေ။
Posted by ခိုင်ခိုင်စောလွင် at 12:49 AM2comments: